စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မိခင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းပြတ်တောက်ခြင်း - ဆုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း (၂၀၁၁) - Your Brain On Porn
စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်မိခင်မိဘအုပ်ထိန်း circuitry ၏နှောင့်အယှက်: ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ rewiring (2011)
တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011 ဇူလိုင် 6; 2: 37 ။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2011.00037 ။ eCollection 2011 ။
ဟယ်လီနာဖက်စပ်ရပ်သဖော့ဒ1*, စာရာသည် K. Williams က2*, Sheryl Moy2,3, Linda C. Mayes1 နှင့် ဂျိုးဇက်အမ် Johns2,3
1 ယေးလ်ကလေးလေ့လာမှုစင်တာ, ယေးလ်တက္ကသိုလ်, New Heaven, CT, USA
2 စိတ်ရောဂါကုသမှု, မြောက်ကာရိုလိုင်းနား-Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA သို့တက္ကသိုလ်ဦးစီးဌာန
3 Developmental မသန်မစွမ်း, မြောက်ကာရိုလိုင်းနား-Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA သို့တက္ကသိုလ်အဘို့အကာရိုလိုင်းနားအင်စတီကျု
စွဲမူးယစ်ဆေးမှီခိုတည်တံ့ခိုင်မြဲအတွက်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ယန္တယားမှအပြုသဘောအားကောင်းရာမှတစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီထင်ဟပ်တိုးပွားလာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်တကွ, ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအာရုံကြောဆားကစ်များအကြားရှုပ်ထွေးပြီးအပြန်အလှန်ကိုယ်စားပြုတယ်။ Preclinical လေ့လာမှုများအထူးသဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများအောက်တွင်, ဒီအကူးအပြောင်း subserving အဖြစ်တိုးချဲ့ amygdala အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုညွှန်ပြကြသည်။ အဆိုပါစွဲလမ်းခွအေနကေိုမှာတော့အကျိုးကိုစနစ်ကသည်အခြားဆုလာဘ်၏ salience attenuating ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအကျိုးသက်ရောက်စေအနုတ်လက္ခဏာများ၏သက်သာချောင်ချိရေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောလေ့အပြုအမူတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, စွဲဟာ prefrontal cortex (PFC), ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့်နျူကလိယ accumbens (NAc) အပါအဝင် core ကိုဆုလာဘ်စနစ်များ, အကြား dysregulation အဖြစ် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်၏တိုးချဲ့ amygdala ထင်ဟပ် ။ ဤတွင်ကျနော်တို့စဉ်အတွင်းအာရုံကြော function ကိုပြောင်းလဲမှုများ၏အကျိုးဆက်များကိုစဉ်းစားပါသို့မဟုတ်မိဘအုပ်ထိန်း, စွဲအားဖြင့်နှောင့်အယှက်စေခြင်းငှါဟာမွေးရာပါဆုလာဘ်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်စွဲလမ်းအောက်ပါ။ အထူးသကျနော်တို့စွဲများနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းဤစနစ်များ၏အလှူငွေအားဖြင့်ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ၏ dysregulation ကိုထောကျပံ့သော preclinical နှင့်လူ့လေ့လာမှုများကိုဖျောပွ။ တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားသည်ဤတူညီသောဒေသများတွင်စွဲအတွက် dysregulated ရှိသူများဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူမိဘအုပ်ထိန်းအတွက် hypothalamus များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, PFC, VTA နှင့် NAc အကြံပြုထားသည်။ ထိုမှတပါး, စွဲလူကြီးများအတွက်ကျနော်တို့မိဘအုပ်ထိန်းတွေကိုစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုထက်ဆုလာဘ် salience ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအဆိုပြု, ဤစွဲလမ်းအပြုအမူတွေနှင့်ကလေးလျစ်လျူရှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုများအတွက်အလားအလာနှစ်ဦးစလုံးကိုဆွဲထုတ်, အနုတ်လက္ခဏာပြည်နယ်များကိုထိခိုက်အရှိန်မြင့်စေနိုင်သည်။
စွဲ Self-စည်းမျဉ်းများတွင်ချွတ်ယွင်းတဲ့သိသိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် conceptualized ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်ဦးစလုံးအားဖြည့်ယန္တရားများဖွယ်ရှိစွဲများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအထောက်အကူပြု; ကနဦးအသုံးပြုမှုကိုအောက်ပါယခင်ကိုယ်စားပြုအကျိုးကိုတုံ့ပြန်မှု, abstinence ၏အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပြည်နယ်၏ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုမှုကိုကိုယ်စားပြုသောအဆုံးစွန်သော။ တစ်ဦး neurobiological အဆင့်တွင်ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်စနစ်၏ activation (ဆိုလိုသည်မှာ, အပြုသဘောအားကောင်း) မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအလေးပေးစဉ်အခါ, ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်၏ activation ဆုတ်ခွာ (ဆိုလိုသည်မှာ, အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်) နဲ့ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲအုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါစွဲလမ်းခွအေနအေမှာမူးယစ်ဆေးအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏ကယ်ဆယ်ရေးလေ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှဦးဆောင်လျက်, ဆုလာဘ်စနစ်ကစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု၏ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းလေ့အပြုအမူထိန်းသိမ်းရန်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် "Co-ရွေးချယ်" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Co-optation နှင့်အတူအခြားပိုပြီးသပ္ပါယ်ဆုလာဘ်သူတို့ conditional စိတ်ဖိစီးမှုကယ်ဆယ်ရေး-ဆုလာဘ် link ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖြစ်အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ အရေးကြီးတာကအဲဒီဆုလာဘ်လူမှုရေးဆက်နွယ်မှုများနှင့်ဆက်ဆံရေးများပါဝင်သည်နှင့် Co-optation ဒီလိုမျိုးစွဲလူကြီးများအကြားနှင့်အမှန်ပင်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးအဘို့မိဘအုပ်ထိန်းအပြုအမူတွေများအတွက်လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ထိုအဖြစ်ရပ်မှာတော့ဆက်ဆံရေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စောင့်ရှောက်မှုများအတွက်တောင်းဆိုချက်များကို၏စွဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လာပေမည်။ ဒါကွောငျ့အစားဆက်နွယ်မှုကကမ်းလှမ်းစံတန်ဖိုးဆုလာဘ်များ, ဆက်ဆံရေးကိုပိုပြီးစိတ်ဖိစီးဖြစ်လာသည်နှင့်လူမှုရေးသို့မဟုတ်မိခင်ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူကြူးစဉ်ဆက် compulsive သို့မဟုတ်စွဲလမ်းအပြုအမူများအတွက် cue အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ဤစာတမ်းတွင်တှငျကြှနျုပျတို့ပုံတွင်ဖော်ပြထားသောအောက်ပါဆိုဖြေရှင်းရန် preclinical နှင့်လူ့လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထားကိုဖျောပွပါမညျ 1: (က) စွဲလမ်းဖြစ်စဉ်များဆုလာဘ်စနစ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများအကြားချိန်ခွင်လျှာတစ် dysregulation တစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဟူမူကား, (ခ) မိဘအုပ်ထိန်းယခုမိဘတစ်ဦးဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်အလွန်အမင်းအဓိကဖြစ်လာကြောင်းအမျိုးအနွယ်ထံမှသက်ဆိုင်ရာတွေကိုမှနှစ်ဦးစလုံးဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်းအာရုံကြောစနစ်များအထူးလိုက်လျောညီထွေကပါဝင်ပတ်သက်; (ဂ) အစွဲလမ်းခွအေနကေိုအတွက်မိဘအုပ်ထိန်းတွေကိုကြိုးပေမယ့်အစားစိတ်ဖိစီးမှုမရှိကြပေ။ ဤသည်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ဘဲအပြုအမူပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်မွေးကင်းစကလေးရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့မတက်ရောက်ထက်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်စေခြင်းငှါကြီးထွား။ ကျနော်တို့ကဒီမော်ဒယ်လ်များအတွက်အထောက်အထားကိုစူးစမ်းဖို့ကိုကင်းစွဲအာရုံစိုက်ပါ။
ပုံ 1 ။ စွဲလမ်းနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းအကြားဆက်ဆံရေး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်များတွင်စွဲမိဘအုပ်ထိန်းကိုထောကျပံ့ဖို့အဆင်ပြေအောင်နေကြနှစ်ဦးစလုံးရာ၏, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုလာဘ်စနစ်များ၏ dysregulation ကိုယ်စားပြုတယ်။ အဆိုပါစွဲအခြေအနေမှာကျနော်တို့မူးယစ်သွေးဆောင်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦးထက်ပိုစိတ်ဖိစီးမှု neurophysiological တုံ့ပြန်မှုဖြင့်အစားထိုး, attenuated ခံရမွေးကင်းစကလေးတွေကိုများ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတင်ပြသည်။ မွေးကင်းစကလေးတွေကိုရန်ဤစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု abstinent မိခင်များအတွက်မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့် relapse မြှင့်တင်ရန်, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဘို့တဏှာတိုးပွားစေခြင်း, လျစ်လျူရှု၏သံသရာမှုတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ကိုကင်းမိခင်အပြုအမူ Disrupts: ကြွက်နှင့်လူ့ဒေတာများအနေဖြင့်အထောက်အထား
ကိုကင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုသိသိသာသာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ 2008 ခုနှစ်, 1.4 သန်းအမေရိကန်များ (မိမိတို့၏ကင်းစွဲများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခိုဘို့ DSM-IV စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, 2008) ။ (ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးကိုကင်းသုံးစွဲမှုနှုန်းတိုးမြှင့်ပြီ, လေ့လာမှုများ၏နံပါတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီKuczkowski, 2004) ။ ဆက်လက်ယင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလသို့ကင်းအသုံးပြုမှုကိုအဆန်းမဟုတ်ပါဘူးနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောပြဿနာများတင်ဆက်; အထူးသ, မိခင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု (ကလေးကလျစ်လျူရှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ငွေကြေးနှင့် Wilkes, 2003) ။ အမူအကျင့်များနှင့် neurobiological အဆင့်ဆင့်မှာလူ့မိဘအုပ်ထိန်းအပေါ်ကိုကင်းသက်ရောက်မှုလေ့လာနေ၏ရှုပ်ထွေးကင်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နှင့်အရှင်, ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနမှထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုတင်ပြကြသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝ variable တွေကိုများ၏အနံများကရှုပ်ထွေးနေသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့လူ့လေ့လာမှုများနှင့်အတူအခြေခံသိပ္ပံကနေအလုပ်ပေါင်းကူးဆက်သွယ်ပေးမယ့်ဖြည့်စွတ်ချဉ်းကပ်ယူပါ။ အများဆုံးနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်ပြပွဲသူတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်ဆီသို့မိဘစောင့်ရှောက်မှုအချို့ကိုပုံစံဖြစ်သော်လည်းလူသားများဆင်တူသူတို့နိုင်ရန်အတွက်တစ်ကြီးမားကတိကဝတ်လိုအပ် altricial မွေးကင်းစထုတ်လုပ်ရန်သောကွောငျ့, ကြွက်မိခင်အပြုအမူ (MB) ၏စတင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏လေ့လာမှုကဲ့သို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ preclinical မော်ဒယ်များအစေခံ ရှင်သန်မှုအာမခံပါသည်။ အဆိုပါပုံမှန်ကြွက်မိခင် (ရေကာတာ) သာစားစရာဘို့ forage ဖို့အသိုက်မှထွက်ခွာ,2ရက်သတ္တပတ်ကိုရွှေ့ဆိုင်ဘို့ခွေးများနှင့်အတူတစ်ခုလုံးကိုနေ့ကသုံးစွဲသည်။ ကြွက် quantified နှင့်သူနာပြုနှင့်မွေးကင်းစကလေးမြောကျမတို့အဖြစ်မွေးကင်းစကလေး (အသိုက်-အဆောက်အဦး) အတွက်လုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်ပြင်ဆင်နေအပါအဝင်လူသားအပြုအမူဆက်စပ်မှုရှိသည်နိုင်မွေးကင်းစ (ခွေးများ) ဆီသို့ကျပုံစံအပြုအမူတွေကိုပြ။ မိခင်ကျူးကျော်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရေးလည်း, အရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်းအသစ်ကလူ့မိခင်များအားဖြင့်ကြုံတွေ့ "ကာကွယ်စောင့်ရှောက်" ကိုအလားတူသောအပြုအမူပေါ်ထွက်လာ။ ကျနော်တို့လူ့ခြင်းနှင့်ကြွက်လေ့လာမှုများအတွက်ကို MB မှကိုကင်းပြတ်တောက်၏ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုစဉ်းစားခြင်းဖြင့်ဤစာတမ်းတွင်စတင်ဖို့။
လူ့လေ့လာမှုများမှာတော့မိဘအုပ်ထိန်းအပေါ်ကိုကင်းထိတွေ့မှုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး၏အကျိုးဆက်များမိခင်ကလေး interaction က၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်မှတဆင့်အဓိကအားစူးစမ်းခဲ့ကြသည်။ (12-48 ဇကိုရွှေ့ဆိုင်အတွင်း, ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကိုကင်းကိုအသုံးပြုတဲ့သူမိခင်များကပို့မှုသည်တုံ့ပြန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-လွတ်ကြ၏တဲ့သူမိခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသူတို့မွေးကင်းစကနေပိုပြီးဆဲပါခဲ့ကြသည်Gottwald နှင့် Thurman, 1994) ။ မွေးကင်းစနှင့်အတူအစောပိုင်းအလုပ်အပြုသဘော၏စကားရပ်လျှော့ချကိုယ်ဝန်သက်သေအထောက်အထားစဉ်အတွင်းကင်းသုံးပြီးမိခင်များထိခိုက်စေခြင်းနှင့်မွေးကင်းစကလေးတွေကိုမှ sensitivity ကိုကြောင်းအကြံပြုအဖြစ် dyadic interaction က (စဉ်အတွင်းတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အရင်းအမြစ်များဆင်းရဲတဲ့ဘန်း et al ။ , 1991, 1997) ။ တစ်လျှော့ချရေး (တစ်ခုခုကိုပြသကြပါပြီမိခင်ကလေးအတွက် interaction ကအကဲဖြတ်တက်အတိုင်းလိုက်နာ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိုကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့် modulated ပေါ်လာရှိပါတယ်အစောပိုင်းချို့ယွင်းနေချိန်မှာကြောင်းအကြံပြုအချို့သက်သေအထောက်အထားများ (ဥပမာနို့စို့သူငယ်ဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျှော့ချသွားကလေးငယ်ကိုမှအာရုံထဲမှာပြောင်းရွှေ့ရသည်) ဖြစ်ပါသည်Mayes et al ။ , 1997) သို့မဟုတ်, ဤတူညီသောအလုပ်မဖြစ် (၏မရှိခြင်းဘောလုံးကို et al ။ , 1997) ကိုကင်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြံပြုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်။ ဤသည် (ကိုကင်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူ dyads ၏ maladaptive နှင့်ရန်လိုသော interaction က evidencing လွန်းထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကအတွက်မိခင် interaction ကအပေါ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိုကင်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများလေ့လာစူးစမ်းဖို့လေ့လာမှုများသတိပေးခံရထားပါတယ်ဂျွန်ဆင် et al ။ , 2002; Uhlhorn et al ။ , 2005; Molitor နှင့် Mayes, 2010) ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုလည်းအစာကျွေးဖြစ်စဉ်များစဉ်အတွင်းစူးစမ်းခဲ့ကြသည်။ ဆင်းရဲတဲ့နို့တိုက်ကျွေးရေး interaction ကကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကိုကင်းကိုအသုံးပြုတဲ့သူမိခင်များအစီရင်ခံခဲ့သည်သူ (ပြန်ရောက်သွားတယ်မဟုတ်ခဲ့သောမိခင်များမှနှိုင်းယှဉ်ရွှေ့ဆိုင်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဘလက်ဝဲလ် et al ။ , 1998) ။ ဤရွေ့ကားအစာကျွေး dyads ( သာ. ကြီးမြတ်ပဋိပက္ခသရုပ်ပြEiden, 2001) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အာရုံမခံစားနိုင်သော (Eiden et al ။ , 2006) မိခင်နှင့်ကလေးများအကြား။ ဒါဟာ (မိခင်ကလေး interaction ကအတွက်ချို့ယွင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကိုလောင်ကင်း၏ပမာဏကိုလည်း related စေခြင်းငှါသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်Tronick et al ။ , 2005), အဖြစ်ကိုရွှေ့ဆိုင်ကိုအသုံးပြုခြင်း (ဘလက်ဝဲလ် et al ။ , 1998; ဂျွန်ဆင် et al ။ , 2002; Eiden et al ။ , 2006) ။ ယနေ့အထိကင်းမထုတ်ဝေ neuroimaging လေ့လာမှုများမိခင်များစွဲရှိပါတယ်ပေမယ့်ကြည့်ရှုမွေးကင်းစကလေးမျှမကင်းအသုံးပြုမှုသမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူမိခင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤအမျိုးသမီးရင်ဆိုင်နေရအခါ, ကနဦးရှေ့ပြေးအလုပ် (differential ကို prefrontal cortex (PFC) activation အကြံပြုStrathearn နှင့် Kosten, 2008).
ထိုး, ကြာချိန်, စမ်းသပ်ခြင်း၏အချိန်နှင့်ကုသမှု regimen အပေါ်မှီခိုပြတ်တောက်၏အတိုင်းအတာနှင့်အတူကြွက်များတွင်မိခင်-မွေးကင်းစကလေးဒိုင်းနမစ်အပေါ်လေ့လာရေးစူးရှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, ဒါမှမဟုတ်နာတာရှည်ကုသမှု regimen တဆင့်ကင်းသောထိတွေ့မှုပြသပြီ, ကို MB ၏ရှုထောင့် disrupts, (Johns et al ။ , 1994; နယ်လ်ဆင် et al ။ , 1998) ။ (; 1 / ကီလိုဂရမ် MG GD 20-30) သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းထိုးမှတဆင့်ရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်း, ပြီးတော့ခွေးများနှင့်အတူခွဲခြာနှင့်ပြန်လည်ဆုံဆည်းအောက်ပါ pup-ညွှန်ကြားကို MB များအတွက်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဦးတည်းအသုံးအများဆုံးပါရာဒိုင်းခုနှစ်တွင်ဆည်ကိုကင်းဖြစ်စေနာတာရှည်ကိုယ်ဝန်ရက်လက်ခံရရှိသည်။ regimen တိုးလာအောင်းနေချိန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှင့်ကိုလျက်နှင့်အသိုက်-အဆောက်အဦများတွင်ပြဿနာများနှင့်အတူသူနာပြုများ၏ကြာချိန်လျော့နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုကင်းကုသဆည်လည်း (လူမှုရေးအပြုအမူလိုငွေပြမှုအတိတ် pup ဆက်ဆံရေးတိုးချဲ့စေခြင်းငှါညွှန်း, maladaptive မိခင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူပြJohns et al ။ , 1997b; McMurray et al ။ , 2008) ထိုအပတ်စဉ်ပြတ်တောက် (hyperactivity သို့မဟုတ်ကင်းဆုတ်ခွာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြသည်မဟုတ်Johns et al ။ , 1997b), စိတ်ခွန်အားနိုးသို့မဟုတ်လူမှုရေးအပြန်အလှန် circuitry အတွက်အစားကိုပြောင်းလဲအကြံပြုခြင်း။
ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းကုသမှုမတူဘဲ, ကိုယ်ဝန်ပြန်လည်ရယူခြင်းတိုးပွါးတော်ရှေ့မှာကင်းမှထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်နှင့်ကြွက်များနှင့်ကြွက်များအစောပိုင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ထဲမှာအပြုအမူတွေကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်, အဲဒီလူကြီးကိုကင်းထိတွေ့အကြံပြုခြင်းထိုကဲ့သို့သောခွေးများအဖြစ်အကြာတွင်သဘာဝကျကျကြိုးလှုံ့ဆော်မှု, (ဆီသို့စိတ်ခွန်အားနိုး salience နှင့်အပြုအမူပွောငျးလဲတူနှင့် Febo, 2010) ။ ဤအမိခင်များခွေးများ retrieve မှမြန်ခဲ့ကြပေမယ့်သို့သော်သူတို့ salience ကစောင့်ရှောက်၏လုပ်ရပ်အတွက်အနီးအနားပေမယ့်မ pup ရှိခြင်းအတွက်ဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းအခြား MBs စတင်ရန်ကြာကြာယူခဲ့ပါတယ်။ နိုးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) အကြိုးလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့အောက်ပါဦးနှောက်တိုင်းဒေသကြီးများ၏ activation ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်ကင်း pre-ထိတွေ့မှုကိုလည်း medial prefrontal cortex (mPFC), striatum နှင့်အာရုံ cortex အတွက် pup နို့စို့ဖို့ activation လျော့ပေမယ့် mPFC အတွက်ခွေးများထိတွေ့အပေါ်သို့ DA ၏အခြေခံ dopamine (DA) သို့မဟုတ်ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုး (မထိခိုက်ခဲ့ပါFebo နှင့်ကူးတို့, 2007), MB နဲ့စွဲအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ supporting ကဤဒေသများကိုင်တစ်ဦးပွိုင့်ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းတွင်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက်မှပြန်လာကြလိမ့်မည် process လုပ်တယ်။
အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤတွေ့ရှိချက်များသိသိသာသာကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်း MB အထိပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်စဉ်အတွင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်သည်နောက်, ရှေ့မှာကင်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖော်ပြသည်။ MB အထိလုံးဝဖျက်သိမ်းမဟုတ်ပါဘူးကတည်းကကျနော်တို့ကဤအပြုအမူအပြောင်းအလဲများအမျိုးအနွယ်၏အကျိုးကို salience အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုညွှန်ပြစေခြင်းငှါတင်ပြသည်။ ထို့အပြင်ကိုယ်ဝန်ကနေရွှေ့ဆိုင်ဖို့အကူးအပြောင်းမိခင်များမှမူလကပင်စိတ်ဖိစီးမူကား, သို့သော်အခုအသစ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖို့အောင်မြင်သောလိုက်လျောညီထွေ allostatic ယန္တရားများများ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ Allostasis များသောအားဖြင့်ဟော်မုန်းစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏ activation မှတဆင့် homeostasis ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေစိန်ခေါ်မှုများကိုတုံ့ပြန်၏တက်ကြွမှုလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အောင်မြင်သောဒီစိတ်ဖိစီးမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်လျောညီထွေနှင့်တစ်ဦးမွေးကင်းစကလေးရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့သင့်လျော်စွာတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းနို့စို့သူငယ်ရဲ့ရှင်သန်မှုများအတွက်အရေးပါသည်နှင့်, အရှင်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တလျှောက်လုံးထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ဒါဟာ (မူးယစ်ဆေးစွဲစိတ်ဖိစီးမှု Non-မိဘအုပ်ထိန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာမှပုံမှန်လိုက်လျောညီထွေနှောင့်အယှက်နိုင်သည်ကိုအဆိုပြုပြီးပါပြီသည် Le Moal, 2009); ယင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလမသိရသေးဖြစ်နေဆဲနှင့်အထက်ဖော်ပြထားတဲ့မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်လိုငွေပြမှုများအတွက်အလားအလာရှင်းပြချက်ကမ်းလှမ်းဘို့သို့သော်တူညီခြင်းရှိမရှိမှန်သည်။ ဤနေရာတွင်တင်ပြသုံးသပ်ချက်မိဘအုပ်ထိန်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအကျိုးကိုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတွက်အာရုံကြောအဆောက်အဦများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု (ပုံတွင်ဖော်ပြထားသောစဉ်းစား 2).
ပုံ2။ စိတ်ဖိစီးမှု, ဆုလာဘ်များနှင့်မိဘအုပ်ထိန်း၏ neurocircuits အကြားဆက်ဆံရေး။ circuitry (အနီ) စိတ်ဖိစီးမှု (အပြာ) နှင့်ဆုလာဘ် (အဝါရောင်) နှင့်အတူအစုရှယ်ယာအများအပြားဒေသများပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း။ အလယ်ဗဟိုတွင်ဖော်ပြထားသောအဆိုပါဒေသများတဦးတည်းဆားကစ်၏ဒေသများတွင်ပြတ်တောက်အခြားချိတ်ဆက်ဆားကစ်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်ကြောင်းအကြံပြု, သုံးခုစလုံးဆားကစ်နှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးမိဘစောင့်ရှောက်မှု၏စွမ်းဆောင်ရည် (နှင့်ဤအမြိုးအစားထဲသို့ကျကြောင်းအပြုအမူများအများအပြားအမျိုးအစားများ) ဦးနှောက်၏အများစု၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုလိုအပ်သည်သောမိဘ Circuitry စက်ဝိုင်းတွင်ထည့်သွင်းတိုင်းဒေသကြီးများ၏အရေအတွက်အားဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒဏ္ဍာရီထဲမှာအရောင်နိုင်တဲ့ coding တစ်ခုချင်းစီကိုဒေသပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာဗေဒဦးနှောက်စနစ်များကိုဖော်ပြသည်။
ဤသုံးသပ်ချက်အားဗဟိုမိဘမှအကူးအပြောင်း subserving သိသိသာသာ neurobiological အပြောင်းအလဲများရှိပါသည်သောအယူအဆဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားနှစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်၏ Synaptic နှင့်မှတ်တမ်းစည်းမျဉ်းအဆင့်ဆင့်မှာ plasticity ညွှန်ပြဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် neurochemical အပြောင်းအလဲများကိုအမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ ဤစာတမ်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်အာရုံခံ၏ dynamic သဘောသဘာဝညွှန်ပြရန်ပလပ်စတစ်အဖြစ်, ရလဒ်အဖြစ်လည်းကောင်းမိခင်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုကနေအာရုံခံ function ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲအဲဒီ receptor စကားရပ်, ဒါမှမဟုတ် peptide အဆင့်ဆင့်ရည်ညွှန်း။ မိခင်မှအကူးအပြောင်းလုပ်ဖို့အရေးပါသည့် hypothalamus ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် neuropeptide oxytocin (OT) ၏ထုတ်လုပ်မှုသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဦးဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုသုံးသပ်မတိုင်မီ MB အထိများ၏စတင်နှင့် hypothalamus နှင့် oxytocin များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုစဉ်းစားခြင်းနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဆုချ circuitry နှင့်မိဘအုပ်ထိန်းဘို့မိမိတို့လိုက်လျောညီထွေ။
အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ (MPOA) နှင့် stria terminalis (BNST) ၏ ventral အိပ်ရာနျူကလိယ (ကို MB ၏ Initiative နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မိဘအပြုအမူတွေဖို့ switch ကိုထိန်းချုပ်တိုက်ရိုက်ဒေသကိုယ်စားပြုNuman, 2007) ။ အဆိုပါ MPOA, အ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA), နျူကလိယ accumbens (NAc) တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ် mPFC, BNST နှင့် paraventricular နျူကလိယ (PVN), ကရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်းအားကောင်းတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုမှခွင့်ပြု။ အဆိုပါ MPOA မှတွေ့ရှိရပါသည်လုံးဝကြွက်များတွင်ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်အသိုက်-အဆောက်အဦအပြုအမူတွေကိုဖျက်သိမ်း။ သူနာပြုကလျော့သော်လည်းနေဆဲ, အောက်ပါတွေ့ရှိရပါသည်လေ့လာတွေ့ရှိသည်နှင့်ခွေးများထုတ်ရှာကြံနှင့် non-တုံ့ပြန်မှုရေကာတာမှပူးတွဲ၏ရလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤရလဒ်သည် (ထို MPOA ကို MB အတွက်မက်လုံးပေးလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းညွှန်ပြNuman, 2007) ။ MPOA အာရုံခံ activation တိုးတက် c-FOS, CREB နှင့် fMRI ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်, (ပထမဦးဆုံး2ကိုရွှေ့ဆိုင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းခွေးများနှင့် pup တွေကိုမှအောက်ပါထိတွေ့လေ့လာတွေ့ရှိနေသည်Fleming ကနှင့် Korsmit, 1996; Febo et al ။ , 2005; Jin က et al ။ , 2005) ။ အထူးသ, mouse ကို Mutant လိုင်းများအတွက် CREB ၏ချို့တဲ့ခွေးများ retrieve မှ pup သေဆုံးမှုနှင့်အောင်းနေချိန်များတွင်သိသာထင်ရှားသောလိုငွေပြမှုအတွက်တိုးစေပါတယ်နှင့်ခွေးများများ၏အရေအတွက် (ပြန်အသိုက်မှယူဆောင်Jin က et al ။ , 2005) ။ DA နှင့် serotonin (5-HT) ကိုယ်ဝန်ကိုဖြတ်ပြီးဤဒေသတွင်အခြေခံအဆင့်ဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်, သို့သော် norepinephrine (NE) ဒီကာလအတွင်းလျော့ကျနေသည် (Olazabal et al ။ , 2004) ။ ယေဘုယျအား, ထိုရလဒ်များ MPOA အတွက် CREB activation ကို MB ၏စတင်ထုတ်ဖော်ဘို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ မိခင်မသိသောမွေးကင်းစမှနှိုင်းယှဉ်လျှင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မွေးကင်းစ၏ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသည့်အခါလူ့မိခင်များ၌ဤအတူစုဆုံ, နို့စို့တွေကိုမှမိခင် sensitivity ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု (differential ကိုပု hypothalamus ၏မော်ဂျူအဖြစ် pituitary နှင့် PFC ဒေသများထင်ရှားStrathearn et al ။ , 2009) ။ အဆိုပါ hypothalamus အတွက်လှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းတစ်ကစားအပြန်အလှန် (အဖြစ် pituitary နှင့် ventral striatum) အောက်ပါထို့အပြင်ဤအဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုအတွက်မိခင် OT တုံ့ပြန်မှု။
(oxytocin ကြွက်နှင့်လူ့အပါအဝင်အများအပြားနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်အတွက်ကို MB စတင်ခြင်းစတင်တစ်ဦးအလယ်ပိုင်းအခန်းကဏ္ဍ, ဒါပေမယ့်ကို MB ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုလျော့နည်းရှင်းပါတယ်Pedersen နှင့် Boccia, 2002; Feldman et al ။ , 2007) ။ အဆိုပါကြွက်များတွင်ဗဟိုအဓိက olfactory မီးသီး (MOB), MPOA, NAc, amygdala (Amy), hippocampus နှင့် VTA ဖို့ PVN စီမံကိန်းအတွက်ကနေညီလေးအာရုံခံ (ပုံကိုကြည့်ပါ 3) ။ မွေးကင်းစကလေး-ထုတ်လုပ်သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှု (တုံ့ပြန်အတွက်သွေးကြောထဲသို့အရံလွှတ်ပေးရန်များအတွက် pituitary ဖို့ PVN နှင့် supraoptic နျူကလိယ (သား) စီမံကိန်းကိုထံမှ OTUvnas-Moberg et al ။ , 2005; Hatton နှင့်ဝမ်, 2008) ။ ညီလေးများအတွက်တရားမဝင်သော mouse ကိုလိုင်းများကို အသုံးပြု. အလုပ် (OT နို့ထွတ်အပေါ်သက်ရောက်မှုကြောင့်အမှိုက်သရိုက်များ၏ရှင်သန်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်ပါပဲ, ဒါပေမယ့်မိခင်တုံ့ပြန်မှု၏အခြားရှုထောင့်အဘို့အဝေဖန်မကျမည်အကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီLee က et al ။ , 2009) ။ OT တရားမဝင်သော-Mutant (ပုံမှန်မျိုးပွားခြင်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုရှိပေမယ့်ဖာဂူဆန် et al ။ , 2000, 2001), အ OT receptor မျိုးရိုးဗီဇ၏လျာထားသောနှောင့်အယှက်တွေနဲ့ mouse ကိုဆည်တစ်ဦးချင်းစီ pup retrieve ဖို့နဲ့တစ်ဦးဝပျကိုယ်ဟန်အနေအထားယူဆရန်ပိုရှည် latency နှင့်တိုတောင်းအချိန်အပါအဝင် pup ပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောလိုငွေပြမှုသည်ခွေးများကိုကျော်ဝပျကုန်ရပြီ (Takayanagi et al ။ , 2005) ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအနိမ့်လုပ်ငန်းဆောင်တာအချိန်ပိုအဲဒီ receptor allele နှင့်အတူလူ့မိခင်များ (အရွှေ့ဆိုင်ထဲမှာနိမ့်မိခင် sensitivity ကိုပြသBakermans-Kranenburg နှင့်ဗန် Ijzendoorn, 2008) ။ OT function ကိုအတွက် ALTER အတွက် mutation နှင့်အတူကြွက်တွေမှာမိခင်လိုငွေပြမှုအခြေခံမှအကြံပြုခဲ့ကြ Peg3 (အဖေဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုဗီဇ 3) ။ အမြိုးသမီး Peg3 (Mutant ကြွက်တွေကို MB အတွက်အကြီးအကျယ်ချို့ယွင်းရှိသည်နှင့်လစ်လပ်နို့ပါစေ-Downရှမ်ပိန် et al ။ , 2009) ။ ဤရွေ့ကားလိုငွေပြမှုဟာ hypothalamus အတွက်အချိန်ပိုတွင် neuron အတွက်လျှော့ချဆက်စပ်နှင့်ထဲမှာ MPOA နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အတွက် binding OT လျော့နည်းသွားပြီ Peg3 Mutant (ရှမ်ပိန် et al ။ , 2009).
ပုံ3။ အဆိုပါကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ Oxytocinergic projection။ oxytocin လွှတ်ပေးရန်ဆုလာဘ်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မိခင် circuitries အတွက်အချက်ခန္ဓာဗေဒသင့်လျော်သည်။ အဆိုပါ PVN (အနီရောင်ဘဲဥပုံ) နှင့်သားနို့စို့သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် OT Peripheral လွှတ်ပေးရန်ဖို့ posterior pituitary မှ (အပြာရောင်ဘဲဥပုံ) စီမံကိန်း၏ magnocellular အာရုံခံ။ အဆိုပါ PVN ၏ parvocellular အာရုံခံကိုလည်းဆုလာဘ် circuitry (VTA နှင့် NAc), စိတ်ဖိစီးမှု circuitry (hippocampus, Amy နှင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် PVN လွှတ်ပေးရန်) နှင့်မိခင် circuitry (MPOA / BNST နှင့် OB) မှပရောဂျက်များနှင့်အဘို့အရေးပါဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည် လူမှုရေး interaction ကသငျ့လျြော။ PVN, hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ; သား, hypothalamus ၏ supraoptic နျူကလိယ; VTA, ventral tegmental ဧရိယာ; NAc, နျူကလိယ accumbens; Amy, amygdala; MPOA, အ hypothalamus ၏ medial preoptic ဧရိယာ; OB, olfactory မီးသီး။ ကနေအဆင်ပြေအောင်ဦးနှောက်သိထား Paxinos နှင့် Watson (1997).
အားဖြင့်မကြာသေးမီကစက္ကူ Yoshida et al ။ (2009) လူမှုရေးနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူအပေါ်ညီလေးသက်ရောက်မှုများအတွက်နောက်ခံယန္တရား serotonergic neurotransmission တိုးမြှင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါပျမ်းမျှ raphe နျူကလိယမှ OT ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေး (ကြွက်တွေမှာ 5-HT ၏သိသာထင်ရှားသောလွှတ်ပေးရန်မှဦးဆောင်Yoshida et al ။ , 2009) ။ အဆိုပါ 5-HT ၏ပယ်ဖျက်ခြင်း1A or 1B အဲဒီ receptor (အသိုက်, pup ပြန်လည်ရယူခြင်း, သို့မဟုတ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏အခြားအစီအမံအတွက်ဝပျသုံးစွဲအချိန်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး, အမျိုးအနွယ်များ၏အမူအကျင့် profile များကိုအပေါ်မိခင်သက်ရောက်မှုပြောင်းလဲနိုင်သည်ဗန် Velzen နှင့် Toth, 2010) ။ အဆိုပါ serotonin Transporter (5-HTT) ၏ပြုပြင်မွမ်းမံ (ဆိုးရွားသောအခြေအနေများခံနိုင်ရည်များအတွက်ရေရှည်အကျိုးဆက်များနှင့်အတူ, ဆင်းရဲမိခင်ပွားသို့မဟုတ်အခြားပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားများ၏သက်ရောက်မှုမှပိုမိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်အပ်နှင်းနိုင်ပါတယ်Bakermans-Kranenburg နှင့်ဗန် Ijzendoorn, 2008; Kinnally et al ။ , 2009; Heiming နှင့် Sachser, 2010) ။ ညီလေးအားဖြင့် Enhanced serotonergic neurotransmission စိတ်ဖိစီးမှု, ကိုကင်းမှထိတွေ့မှုနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန်ရန်သက်ဆိုင်ရာ CREB function ကို၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်အလားတူထိရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့နှင့် Mb ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ midbrain နှင့် hypothalamus အတွက်အချိန်ပိုနှင့် 5-HT အချက်ပြလမ်းကြောင်းများအကြားအပြန်အလှန် interaction ကပြင်းထန်စွာအောက်ပါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှောင့်အယှက်ခံရနိုငျနှင့်ကို MB အတွက်လိုငွေပြမှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ပလာစမာနှင့်ဦးနှောက်နှစ်ဦးစလုံး OT (hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်Uvnas-Moberg et al ။ , 2005; Slattery နှင့်နျူမန်, 2008) ။ တဦးတည်းလေ့လာမှုမကြာသေးမီကကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းကင်းကိုအသုံးပြုတဲ့သူကလူ့မိခင်များပလာစမာ OT အဆင့်ဆင့်လျှော့ချနှင့်အဆင့်မြင့်ရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှု (ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်အဖြစ်ဤအချက်အလက်, လူ့လက်တွေ့သုတေသနအတွက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအလင်းကို et al ။ , 2004) ။ အဆိုပါ OT system ကိုကို MB ၏အမူအကျင့်ပြတ်တောက် (နဲ့အတူအပြိုင်အတွက်အများအပြားဒေသများတွင်ကင်းသဖြင့်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်Johns et al ။ , 1997a, 2005) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကိုကင်းနှင့်အတူကြွက်ဆည်များ၏နာတာရှည်ကုသမှုပေးပို့၏ 24 ဇအတွင်း MPOA, hippocampus နှင့် VTA အတွက်သိသိသာသာနိမ့်ညီလေးအဆင့်ဆင့် (နိုင်Johns et al ။ , 1997a) ။ ယင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်း acute ကိုကင်း (ကိုရွှေ့ဆိုင်နေ့၌ MPOA အတွက်အဆင့်ဆင့်လျှော့ချ (PPD) 1 နှင့် PPD6အပေါ် Amy အတွက်အဆင့်ဆင့်ပြုစုပျိုးထောင်အပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများတွင် OT အဆင့်ဆင့်နှင့် OT receptors ထိခိုကျနိုငျJarrett et al ။ , 2006; McMurray et al ။ , 2008) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ OT ကိုလည်းမူးယစ်ဆုလာဘ်ဆိုးကျိုးများအတွက်အခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ်။ ကြွက်မော်ဒယ်များအတွက်မကြာမီကလေ့လာမှုများ (OT အုပ်ချုပ်ရေး conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က), Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ၏ reinstatement ၏စမ်းသပ်မှုအတွက် psychostimulant-related တုံ့ပြန်မှုကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့နိုင်သည်ကိုပြသကြယန် et al ။ , 2010) ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုစွဲ, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ကို MB ၏လမ်းဆုံမှာညီလေးများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ခွေးများနှင့် pup တွေကို (CPP ကနှင့် operating တုံ့ပြန် Paradigm နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပြသ, ကြွက်ဆည်ဖို့ကြိုး (စိတ်ခွန်အားနိုး) တနျဖိုးရှိLee က et al ။ , 2000; Mattson နှင့် Morrell, 2005) ။ အထူးသမှတ်စု၏, ခွေးများမကြာခဏ (ခွေးများများ၏စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ခွန်အားကိုညွှန်း, ကင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုထက် သာ. ကြီးမြတ် CPP ကသွေးဆောင်Seip နှင့် Morrell, 2009) ။ သို့သော်ကြွက်လေ့လာမှုများအတွက်ရေကာတာ၏ 30% ကဲ့သို့အများအပြား non-pup ဆက်စပ်အခန်းထဲကကြိုက်တတ်တဲ့, ဤဆည်ကိုကင်းဖို့ သာ. ကြီးမြတ် locomotor ာင်းပြ, လူဦးရေရဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ရည်ညွှန်းဆုလာဘ် circuitry အပေါ်ကိုကင်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုပြီးအားနည်းချက်ဖြစ်ဤသို့ချို့ယွင်းစေခြင်းငှါ (ကို MB အတွက်Mattson နှင့် Morrell, 2005; Seip နှင့် Morrell, 2007) ။ ဆည်ပြည်တွင်းရေးဇီဝြဖစ်စဉ်များအေးစက်ဆိုးကျိုးများအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှနိုင်မအကြံပြုခြင်း, ကညာအမျိုးသမီးကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရေပြားအောက်ဆုံးကိုကင်းထိုးလက်ခံရရှိပြီးနောက် (CPP ကဖြင့်တိုင်းတာကဲ့သို့) ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုကင်းမဲ့အဖြစ်တွေကိုအားဖြည့်များ၏မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုထိန်းချုပ်အဆိုပါ circuitry ယာယီပြောင်းလဲရွှေ့ဆိုင်ဖြစ်ဟန် မူးယစ်ဆေး (Seip et al ။ , 2008).
ဆုလာဘ် circuitry ၏အကွိမျမြားစှာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း DA မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်အတွက်ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍနှင့် "ဆုလာဘ် circuit ကို," ပုံအတွက်တင်ပြအဖြစ်ကြောင်းကိုအဆိုပြုထားကြပါပြီ 4, (သတင်းအချက်အလက်ဆုလာဘ်ရှာဆီသို့ locomotor တုံ့ပြန်မှုမှမောင်းထုတ်ရန် NAc အတွက်စုဆုံနှင့်တကွ, NAc နှင့် mPFC အတူ VTA ချိတ်ဆက်တဲ့ midbrain-forebrain လမ်းကြောင်းပါဝင်ပါသည်Koob နှင့် Volkow, 2010; Sesack နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2010) ။ fMRI ၏ကျယ်ပြန့်သုံးစွဲခြင်းကိုလည်း orbitofrontal cortex (OFC), amygdala, NAc, အဖြစ် PFC နှင့် anterior cingulate cortex (ACC အပါအဝင်ဖော်ထုတ်နှိုင်းယှဉ်ဒေသများ, အတူစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့လူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ် circuitry enabled ပြီ လူယာ et al ။ , 2004) ။ "လို", "သဏ္ဍာန်," နှင့် "သင်ယူမှု" (: တစ်ဦးကကြီးထွားလာစာပေကြောင်းလွတ်လပ်သောသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များသို့ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူတွေ dissects ထွန်းသစ်စသည်ကိုBerridge, 2004; Berridge et al ။ , 2009) ။ Like ဆုလာဘ်၏ချက်ချင်းလက်ခံပြေစာအားဖြင့်အာရုံခံအပျော်အပါး-ဖြစ်ပေါ်အခြေခံသည့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဆနျ့ကငျြ, "လို" အတူတူပင်ဆုလာဘ်များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဒါဟာ (VTA / Nac / mPFC) အထက်တွင်ဖော်ပြထား dopaminergic အချက်ပြအပြုအမူ၏ "လို" ရှုထောင့်အဘို့အရေးအပါဆုံးကြောင်း postulated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသီအိုရီမိခင်စောင့်ရှောက်မှု၏အချို့သောကဏ္ဍများမြင့်မားသော hedonic သက်ရောက်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ, ကနဦးသူနာပြု, မိခင်ကျူးကျော်အိပ်ပျော်ပြတ်တောက်) ရှိသည်ဖို့မဖြစ်နိုင်သော်လည်း, မိခင်များနေဆဲမိခင်စောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ "ချင်" အဘယ်ကြောင့်, ရှင်းပြကူညီလိမ့်မည်။
ပုံ4။ အဆိုပါကြွက်ဦးနှောက်အတွက်ဆုလာဘ် circuitry။ ကြွက်ဦးနှောက်၏ဤ midline sagittal အချပ်လှုံ့ဆော်မှုဆုချီးတုံ့ပြန်အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရအဓိကဦးနှောက်ဒေသများသရုပ်ဖော်သည်။ အဆိုပါ midbrain ၏ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ကိုနျူကလိယ accumbens (NAc) မှ dopaminergic Project (အပြာရောင်မြှား) ပို့ပေးနှင့် prefrontal cortex (mPFC) medial ။ အဆိုပါ mPFC အဆိုပါ VTA မှ glutamatergic စီမံချက်များ (အစိမ်းရောင်မြှား) ပို့ပေးနေစဉ် NAc (အဖြစ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula, LHb), အ VTA မှ GABAergic စီမံချက်များ (အနီရောင်မြှား) ပေးပို့ပါ။ အဆိုပါ mPFC နှင့် NAc အပြန်အလှန် glutamatergic စီမံချက်များရှိသည်။ Activity ကိုဆုလာဘ်ရှာသို့မဟုတ်မက်လုံးပေးအပြုအမူတွေအတွက် NAc ရလဒ်များကို (အနက်ရောင်မြှား) တွင်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ကနေအဆင်ပြေအောင်ဦးနှောက်သိထား Paxinos နှင့် Watson (1997).
Ventral tegmental ဧရိယာ DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု (အ NAc သို့ယာယီနှင့် phasic DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်တာဝန်ရှိသည်လေးလံနေတာတွေ့နေရ et al ။ , 2009) အဖြစ်ဆုလာဘ် circuitry တစ်လျှောက်လုံးနှင့် VTA လှုပ်ရှားမှုမက်လုံးပေးအဘိုးပြတ်နှင့်ရည်မှန်းချက်-oriented အပြုအမူတွေများအတွက်အလွန်အရေးပါဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည် (Koob နှင့် Volkow, 2010) ။ အဆိုပါ VTA ပြန်လည်သုံးသပ် GABAergic interneurons ကဝိုင်း DA projection အာရုံခံ, (ပါဝင်ပါသည် Adele နှင့် Artigas, 2004) ။ သဘာဝကျကျလှုံ့ဆော်မှုဆုချီးတုံ့ပြန်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါနည်းလမ်းတွေထဲမှာကိုကင်းထိတွေ့သက်ရောက်မှု VTA function ကို။ 5-HT, NE နှငျ့ DA ၏ Synaptic အဆင့်ဆင့် acute (တိုးလာပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများအတွက်ရရှိလာတဲ့, သူတို့ရဲ့ပို့ဆောင်ရေးပိတ်ဆို့ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်မှတဆင့်ကင်းတိုးပွားလာကြသည်သောမတ်စ်နှင့် Malenka, 2003) ။ ကိုကင်းလည်း (ပစ်ခတ် VTA GABAergic interneuron လျော့နည်းသွားမှတဆင့်, တားစီးလျှော့ချတိုးပစ်ခတ်ရန်ကိုအထောက်အကူပြုရန်Steffensen et al ။ , 2008) ။ ဤရွေ့ကားကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုနှင့်အတူ habituate မထင်သော်လည်း, အရှင်, ကိုကင်းနာတာရှည် (ပိုမိုမြင့်မားပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများအတွက်ရရှိလာတဲ့သည် VTA အတွက် excitatory သေံတိုးပွါးသောမတ်စ်နှင့် Malenka, 2003), အလားအလာသစ်ကို (နို့စို့ကလေး) လှုံ့ဆော်မှုမရောက်ရှိနိုင်သောပစ်ခတ်များအတွက်တံခါးခုံကိုဖန်ဆင်း၏။ သားအိမ်ဟော်မုန်းအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ပစ်ခတ် VTA DA အပေါ်ကိုကင်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန် (Zhang က et al ။ , 2008သားအိမ်ဟော်မုန်းမြင့်မားစွာ upregulated ကြသောအခါ), အကြံပြုအပြောင်းအလဲများကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဆန်တဲ့နိုင်ပါသည်။ အရေးကြီးတာက, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေးမသော VTA အတွက်ကြာရှည်အလားအလာဖြစ်ပေါ်စေသည်ချန် et al ။ , 2008), ကြောင်းကင်းအကြံပြုသည့်ကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်းလိုအပ်သော VTA အတွက်နောက်ထပ် plasticity တားဆီးနိုငျသညျ။
ကြွက်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထား (ကို MB ၏မက်လုံးပေးရှုထောင့်ရှိအ VTA ထံမှ DA projection အာရုံခံများအတွက်အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါသည်Numan, 2007) ။ အဆိုပါ VTA ဖို့ VTA ၏တွေ့ရှိရပါသည်, သို့မဟုတ် MPOA မှပြင်းထန် axon, (MB အထိနှောင့်အယှက်Numan, 2007) ။ အထူးသဖြင့်ဂါဘမြို့သားများမှတဆင့် VTA ၏ယာယီ inactivation,A receptors, (ခွေးများများအတွက်မိခင်ပြန်လည်ရယူခြင်း, သူနာပြုနှင့် CPP က disruptsNuman et al ။ , 2009; Seip နှင့် Morrell, 2009), VTA လှုပ်ရှားမှု pup လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုများအတွက်အရေးပါကြောင်းအကြံပြု, ကိုကင်း CPP ကနှောင့်ယှက်မပေးနေစဉ်။ အဆိုပါ VTA အတွက် DA ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုမကွာခြားချက်ရှိပေမယ့်သဘာဝ၎င်းတို့၏ခွေးများ၏လျစ်လျူရှုဖြစ်ကြောင်းကြွက် (ပိုမိုမြင့်မား Basal က c-FOS activation ကိုပြသGammie et al ။ , 2008a) ။ ဤသည်လျစ်လျူရှုခွေးများစိတ်ဖိစီးမှုအတွက်လျော့ချရေးကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဤဆည်ဘို့ကြိုးအဖြစ်ကိုရိပ်မိစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ သို့သော်ရှိမရှိ pup ဖယ်ရှားရေးစိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်အချို့ဆည်အတွက်ဆုလာဘ် signal ကိုတိုးပွါးသော်လည်းမအခြားသူတွေကိုတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစေမရှိသေးပါ။ အဆိုပါ VTA အတွက် Electroencephalogram (EEG) နှင့် fMRI တုံ့ပြန်မှုခွေးများနှင့် pup olfactory တွေကို (ထိတွေ့မှုတိုးနေကြတယ်Febo et al ။ , 2005; ဟာနန်ဒက်ဇ်-Gonzalez et al ။ , 2005) ။ အဆိုပါ VTA အတွက်အချိန်ပိုသို့မဟုတ် opioids ၏တိုက်ရိုက်လျှောက်လွှာ (MB အထိလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်Pedersen et al ။ , 1994; Thompson နှင့် Kristal, 1996) ။ မကြာသေးမှီကသက်သေအထောက်အထားများကို (forebrain သို့ VTA DA ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်နှင့် DA လွှတ်ပေးရန်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်ညီလေးများအတွက်တိုက်ရိုက်အခန်းကဏ္ဍညွှန်ပြထားပြီးShahrokh et al ။ , 2010) ။ စိတ်ဝင်စားစရာညီလေးရန် DA ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်ညွှန်ကြားဖို့အချိန်ပိုများ၏စွမ်းရည်အပေါ်တစ်ဦး "ကြမ်းပြင်" အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းအလွန်မိခင်ဆည်အတွက်မဟုတ်ဘဲအနိမ့်မိခင်ဆည်အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်လျှော့ချပေးပါတယ်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤတွေ့ရှိချက် VTA function ကိုအတွက်နှောင့်အယှက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆည်ဖို့ MB နဲ့ခွေးများ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဖော်ပြသည်။ ကိုယ်ဝန်ကိုကင်းကုသကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်း VTA အတွက် NE, DA, ဒါမှမဟုတ် DA metabolites ၏ Basal အဆင့်ဆင့်မထိခိုက်ပါဘူး, သို့သော် Basal 5-HT နှင့် OT (လျော့နည်းသွားကြသည်Johns et al ။ , 1997a; Lubin et al ။ , 2003) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ, VTA function ကိုအတွက်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ကင်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ, ဒီကိုတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့မရှိသေးပါပေမယ့် VTA အာရုံခံ, ညီလေးမှလျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ဤသို့လျော့နည်းပစ်ခတ်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ core နဲ့ shell ကိုခွဲခြားအဆိုပါ NAc, အများအပြားအမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဓိကဆုလာဘ်ရှာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအစိတ်အပိုင်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်နေစဉ် shell ကို (နှိုးဆွ-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များ၏တိုးမြှင့်မှတဆင့်အကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများမက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်di Chiara, 2002; Russo et al ။ , 2010) ။ လူသားမြားသညျမှာ NAc (ဆုလာဘ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း mediatesKnutson နှင့် Cooper က, 2005), ဒေသဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဆုလာဘ်ပြင်းအားအပေါ်သို့မှီခိုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူ (Haber နှင့် Knutson, 2009) ။ အဆိုပါ NAc GABAergic projection အာရုံခံခြင်းနှင့် interneurons ၏အဓိကအားပါဝင်ပါသည်။ အဘယ်သူ၏လှုပ်ရှားမှုဆုလာဘ်ရှာ (ဆက်နွယ်နေကြောင်းသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus, VTA, substantia nigra, brainstem နှင့် ventral pallidum မှအဓိက NAc GABAeric efferents စီမံကိန်းကိုKoob နှင့် Volkow, 2010) ။ အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးဝါးစူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက် NAc အတွက် VTA ထံမှ inhibitory DA ဂီယာ၏ activation (လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်Koob နှင့် Volkow, 2010) ။ ကိုကင်း acute (အဖြစ်ကောင်းစွာ inhibitory 5-HT နှင့် NE ၏အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးလီ et al ။ , 1996) ။ နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့: D upregulates1 အဆိုပါ striatum အတွက် receptors (ဘင်ရက်ရှာဟာ et al ။ , 2007), မြင့်မားမိခင်ဆည်အတွက်စကားရပ်အလားတူ (ရှမ်ပိန် et al ။ , 2004), အကြိုးလှုံ့ဆော်မှုဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့အလားတူသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။ DA Transporter စကားရပ်မပြောင်းလဲဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏လှုပ်ရှားမှု (ကိုကင်းသုံးစွဲမှုနှင့်အတူတိုးပွါးOleson et al ။ , 2009) ။ NE Transporter စကားရပ်ထိခိုက်မပေးစဉ်နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့မှု (5-HT Transporter စကားရပ် upregulatesBelej et al ။ , 1996) ။ Transporter လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးကြိုတင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှလေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းအလားတူပစ်ခတ်တဲ့အဆင့်အထိကိုပြန်သွားဖို့အာရုံခံတစ်ခုကြိုးပမ်းမှုညွှန်ပြလိမ့်မည်။ ကိုကင်းထိတွေ့မှု (ထို NAc shell ကိုမှ excitatory PFC afferents အကြား Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုလျော့ကျခြင်း, ကြာရှည်အဓိကအတွက်ပစ်ခတ်လျော့နည်းသွားဖြစ်ပေါ်စေသည်Russo et al ။ , 2010).
အဆိုပါ NAc ကို MB ၏ Initiative နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အရေးကြီးပါသည်။ NAc ablation သိသိသာသာ (MB အထိလျော့ကျနှင့်အထူး NAc shell ကို lesioning ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့, ဝပျကြားဖြတ်မပြောဘဲပြန်လည်ရယူခြင်းအပြုအမူ disrupts, ဒါမှမဟုတ်အသိုက်-အဆောက်အလီများနှင့် Fleming က, 2003) ။ အဆိုပါ NAc ပြပွဲ (ပထမရွှေ့ဆိုင်တပတ်တလျှောက်လုံးခွေးများတုံ့ပြန်အတွက်က c-FOS စကားရပ်နှင့် fMRI မှတဆင့်အာရုံခံ activation တိုးလာFleming ကနှင့် Korsmit, 1996; Febo et al ။ , 2005) ။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန် (သာ pup တွေကိုမှလေ့လာတွေ့ရှိနေသည်Fleming ကနှင့် Korsmit, 1996) ။ ဆနျ့ကငျြ, (အဖြူဆူညံသံမှဆွေမျိုး) မွေးကင်းစကလေးအော်ဟစ်တုံ့ပြန်တက်ကြွစွာ NAc ဝန်းကျင်ဒေသများတွင်လူ့မိခင်များအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအဖြစ်ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့် cortical နှင့် subcortial ဒေသများ, အဓိကအားဖြင့် (dopamine အားဖြင့် innervated ပြီLorberbaum et al ။ , 2002).
Lactating ကြွက် (ကညာကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါ NAc အတွက်အနိမ့် Basal DA ရှိOlazabal et al ။ , 2004), ဖြစ်ကောင်းအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုများပိုမို sensitivity ကိုခွင့်ပြု။ အချိန်မှန် Vivo အတွက် voltammetry နှင့် microdialysis တိုင်းတာ (သူနာပြုစဉ်အတွင်းတိုးလာ NAc shell ကို DA ပြသနှင့်ကိုလျက်အပြုအမူများ၏ကြာချိန်နှင့်အတူ DA အာရုံစူးစိုက်မှု၏တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုရှမ်ပိန် et al ။ , 2004; Afonso et al ။ , 2008) ။ ယခင်က "အနိမ့်ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့" အဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ဆည်အတွက်အထူးသကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ DA agonists တိုးနှင့်အတူကုသမှု (ရှမ်ပိန် et al ။ , 2004), အချို့တံခါးခုံကိုပိုမိုမြင့်မားလျက်နှုန်းထားများအောင်မြင်ရန်တွေ့ဆုံခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်ကြောင်းအကြံပြု။ NAc တွင်ပုံစံတူစာပိုဒ် pharmacological ကုသမှု (ဆုလာဘ်၏ "လို" ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပြခဲ့ကြBerridge et al ။ , 2009) ။ မကြာသေးမီကကြောင့်: D ပြသထားသည်2 အဲဒီ receptor activation (ပုံမှန် MB အထိဘို့အရေးကြီးပါတယ်Zhao နှင့်နှင့်လီ, 2010) ။ : D ပေမယ့်2 binding အဲဒီ receptor အလွန်အမင်းမိခင်ဖြစ်ကြောင်းဆည်များနှင့်အနိမ့်ကိုလျက် / သူနာပြုနေသောသူတို့အားအကြားကွာခြားပါဘူး, အလွန်အမင်းမိခင်ဆည်ပိုပြီး: D တို1 နဲ့ D3 receptors နှင့်အနိမ့်ကိုလျက် / မြောကျမတို့ဆည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါ NAc shell ကိုအတွက် binding အောက်ပိုင်း DA Transporter (ရှမ်ပိန် et al ။ , 2004) ။ မိခင်လျစ်လျူရှုများအတွက်ရပ်ကြီးတစ်ဦး mouse ကိုအညီ, အများကြီးပိုမိုမြင့်မားက c-FOS စကားရပ်ကိုချက်ချင်း (ထိန်းချုပ်မှုဆည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျစ်လျူရှုစတင်ခြင်းအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိနေသည်Gammie et al ။ , 2008a), အခွံထက် core ကိုအတွက်အကျိုးသက်ရောက် သာ. ကွီးမွတျနှငျ့အတူ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားသည် NAc အတွက်အချက်ပြ dopaminergic ကို MB များအတွက်အရေးပါသည်, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအကြီးအကျယ်ပြပွောငျးလဲနိုငျကတည်းက, ဒီချို့ယွင်း MB အထိဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးအနညျးငယျမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ကိုယ်ဝန်, parturition နှင့်နို့စဉ်အတွင်း NAc အတွင်း plasticity impact ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ဤအနာဂတ်သုတေသနတစ်ခုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်မည်သို့လူသိများသည်။
အဆိုပါ PFC အရေးပါမူးယစ်ဆေးမှီခိုဆီသို့ပြောင်းကုန်ပြီအတွက်အစိတ်အပိုင်းများ, စွဲလမ်း, ဒါမှမဟုတ် MB ရှိပါတယ်အားလုံးသည့်သိမြင် functions များ, အမျိုးမျိုးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ အဆိုပါ PFC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ခြင်းအထူးသဖြင့်လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးလေ့လာတွေ့ရှိ (ACC, OFC, mPFC နှင့် infralimbic အပါအဝင်) နှစ်ဦးစလုံးသည်လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက် cortical ကှကျ၏ဒီဂရီအတွင်းကျယ်ပြန့်အပြောင်းအလဲ (ပေးသော, ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ပါသည်Dalley et al ။ , 2004) ။ အဆိုပါ ACC ကြောင့် Amy, ventral striatum, hypothalamus, periaqueductal မီးခိုးရောင် (PAG) နဲ့သူ့ရဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမှလူမှုရေးအချက်အလက်များ၏ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အဘိုးပြတ်နဲ့ဆက်စပ်နှင့်အာရုံ cortex (ထားပြီးDalley et al ။ , 2004), အဖြစ်ကောင်းစွာအပြုအမူတွေ၏ယာယီ sequence ကိုမိန့်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-ဆုလာဘ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ကောင်းမွန်စွာထူထောင်အခန်းကဏ္ဍသော OFC, အားလုံးအာရုံခံပုံစံများအဖြစ် ventral striatum နှင့် amygdala ဆီက input ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ အဆိုပါ OFC ပျက်စီးမှုလူမှုရေး interaction က၎င်း၏အရေးပါပုံကိုအကြံပြုခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန် / ကြောက်ရွံ့ရန်လိုအပြုအမူတွေအတွက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေမည်။ အဆိုပါ prelimbic နှင့်အသီးသီး dorsally နှင့် ventrally နေထိုင်သည့် mPFC ၏ subdivisions နေသော infralimbic cortical, အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် function ကိုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။ သို့သော်သူတို့က prelimbic cortex အရေးယူ-ရလဒ်ကိုအသင်းအဖွဲ့များမှပံ့ပိုးနှင့် infralimbic ကြွက်များတွင်အလေ့အထဖွဲ့စည်းခြင်းမှပံ့ပိုးအတူသင်ယူမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍကစား။ အဆိုပါ mPFC နှင့် OFC နှစ်ဦးစလုံး (Impulse ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီDalley et al ။ , 2004), ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းတွင်မှပြန်လာပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးပွိုင့်။ ဤအရာအလုံးစုံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဟာသူတို့ရဲ့ function ကိုဤအဒေသများပြောင်းလဲရွှေ့ဆိုင်အပြုအမူတွေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါဘယ်လိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်ပွောငျးလဲဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်, သင့်လျော်တဲ့လူမှုရေးအပြန်အလှန်များအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြောင်းပေးတော်မူ၏။
နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဟာ PFC အတွက် monoamine အချက်ပြများတွင်လိုငွေပြမှုမှချည်ထားသောခဲ့ပြီး; သို့သော်ဤလိုငွေပြမှုအကြောင်းတရားများသို့မဟုတ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်နေဆဲ: Dalley et al ။ , 2008; Koob နှင့် Volkow, 2010; Sesack နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2010) ။ မကြာသေးမှီကသက်သေအထောက်အထားမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအခြေခံမော်လီကျူးယန္တရားများအကြံပြုထားသည်။ စူးရှသောကိုကင်းအောက်ပါဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်တိုး, ဒါပေမယ့်တစ်ခုအဆင်ပြေအောင်အာရုံခံတုန့်ပြန် (Hammer ဂျူနီယာနှင့် Cook ကညွှန်ပြ, အောက်ပါကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေ 1994) ။ ကိုကင်း (fMRI အထီး, အမြိုးသမီးနှငျ့ပတျသကျသောလေ့လာမှုများနှင့်နို့တိုက်ကြွက်များတွင်သွေးစီးဆင်းမှုတိုးပွါးFebo et al ။ , 2004; ကူးတို့ et al ။ , 2005) ။ ကိုကင်း mPFC projection အာရုံခံ (တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သော VTA-မောင်းနှင်တားစီးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကတည်းကဒါဟာတိုးမြှင့်သွေးစီးဆင်းမှုအားဖြင့်တိုင်းတာသည် mPFC ၏ "activation" တိုးမြှင့်, အစား glutamatergic projection အာရုံခံ၏ GABAergic interneurons ၏တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုကနေဖြစ်ပေါ်စေမည်Peterson et al ။ , 1990), ဤဒေသရှိ projection အာရုံခံတစ်ခုတိုးလာတားစီးအကြံပြုခြင်း။ microarray ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် Synaptic plasticity ဗီဇစကားရပ်အပြောင်းအလဲများကိုရာပေါင်းများစွာထဲမှာကိုကင်းသုံးစွဲမှုရလာဒ်များ (Freeman က et al ။ , 2010) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် D ကိုတစ်ဦး upregulation1 အချက်တစ်ချက်လွှတ်အဲဒီ receptor နှင့် corticotropin (CRF) လှုပ်ရှားမှု (ဘင်ရက်ရှာဟာ et al ။ , 2007; Corominas et al ။ , 2010) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီဒေတာကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းမှတဆင့် mPFC function ကိုတစ်ဦးကျဆင်းမှုများအတွက်မျိုးစုံယန္တရားများအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ACC, OFC, infralimbic နှင့် prelimbic cortex အားလုံးပြပွဲ (ဆားထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကင်း-ဆက်စပ်တွေကိုတုန့်ပြန်က c-FOS စကားရပ်တိုးလာCiccocioppo et al ။ , 2001), ဤဒေသများအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသင်ယူမှုများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍညွှန်ပြ။ ဤအဒေသများဖွယ်ရှိဗီဇစကားရပ်မှပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများမှတဆင့်ကင်းထိတွေ့မှုတုံ့ပြန်ကြသည်ပေးထားသောဤအာရုံခံ MBs ဖျော်ဖြေဖို့အကူးအပြောင်းမှုအတွက်လိုအပ် neuroplasticity ၏သင့်လျော်သောငွေပမာဏနှင့်အတူကိုတုံ့ပြန်မည်မဟုတ်ပါ။ ကြိုတင်ကိုယ်ဝန်မှကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးတစ်ဦးကတစ်ခုတည်းလေ့လာမှုကို (mPFC အတွက် pup နို့စို့ဖို့လျော့နည်းသွား activation သရုပ်ပြပေမယ် mPFC အတွက်ခွေးများထိတွေ့အပေါ်သို့ DA ၏အခြေခံ DA သို့မဟုတ်ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုးမထိခိုက်ခဲ့ပါFebo နှင့်ကူးတို့, 2007) ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကိုကင်းကိုယ်ဝန်နှင့်နို့စဉ်အတွင်း PFC အတွက်ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိသို့သော်, ယောက်ျားအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတို့အားအလားတူတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစေမရှိသေးပါ။
အပြုအမူစည်းရုံးရေးအတွက် PFC ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို MB မှလိုငွေပြမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့ PFC function ကိုမှပြတ်တောက်အတူကို MB ဖို့အကူးအပြောင်းမှုအတွက်အရေးပါသည်။ အဆိုပါ mPFC အတွက်ဆိုဒီယမ်လိုင်းများသို့မဟုတ်ဂါဘမြို့သား၏ activation ၏ Pharmacological ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း (ဒီဒေသကြွက်ရေကာတာ၏ပြန်လည်ရယူခြင်းအပြုအမူများအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းပြသထားပါတယ်Febo et al ။ , 2010) ။ ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်ချက်လှုံ့ဆျောမှု investigatory မဟုတ်အပြုအမူတွေအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုညွှန်း, အသိုက်သူတို့ကို retrieve မှသာဆုံးဖြတ်ချက်ခွေးများဆီသို့ချဉ်းကပ်အပြုအမူကိုပြောင်းလဲမပေးခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ mPFC မှ Excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကိုလည်း (ထိုရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်းအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၌ဤဒေသ၏အရေးပါမှုကိုညွှန်ပြ, pup ပြန်လည်ရယူခြင်း, ကိုလျက်နှင့် MBs ၏ခြုံငုံပုံစံသို့မဟုတ်အမိန့် disruptsAfonso et al ။ , 2007) ။ Pup နို့စို့ပု medial နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC နှင့်နို့တိုက်ကြွက်၏နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex, ညီလေးအပေါ်မှီခိုကြောင်းတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု (ထဲမှာ fMRI တုံ့ပြန်မှုတိုးပွါးFebo et al ။ , 2005) ။ EEG ဒေတာ (mPFC လှုပ်ရှားမှု pup အနံ့မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ပြောင်းလဲကြောင်းအကြံပြုဟာနန်ဒက်ဇ်-Gonzalez et al ။ , 2005) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း DA PFC function ကိုစေတယ်။ DA အဆင့်ဆင့်ကညာအမျိုးသမီးကြွက် (နှိုင်းယှဉ်နှောင်းပိုင်းတွင်ကိုယ်ဝန်အတွက်ကြွက်များတွင်နိမ့်များမှာOlazabal et al ။ , 2004), DA အဆိုပါ mPFC အတွက်လှုပ်ရှားမှုတားစီးဖို့ပြုမူကြောင်းပေးထားပိုမိုမြင့်မားခြုံငုံလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သော (Peterson et al ။ , 1990) ။ မကြာသေးမီကမြင့်မား Impulse (mPFC function ကိုမြားတှငျပွောငျးလဲနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအရာကို MB အတွက်လိုငွေပြမှုမှချည်ထားသောထားပြီးLovic et al ။ , 2010) ။ mPFC DA (Impulse ၏အရေးပါသောအာမခံကတည်းကDalley et al ။ , 2008) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုအားဖြင့်နှောင့်အယှက်နိုင်ပါတယ်ဒီကိုတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့မရှိသေးပါပေမယ့်, MB အထိကာလအတွင်းအမူအကျင့်အဖှဲ့အစညျးမှာကွဲပြားခြားနားမှု) (အောက်ပါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသ, အဖြစ်အစောပိုင်း PPD1 သကဲ့သို့, cingulate cortex ပြပွဲ (ခွေးများတုံ့ပြန်က c-FOS စကားရပ်တိုးလာနှင့်ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်မှတဆင့်တွေကိုတုံ့ပြန်ရန်ဆက်လက်Fleming ကနှင့် Korsmit, 1996) ။ အဆိုပါ prelimbic cortex မနေစဉ်ထို့အပြင်အဆိုပါ infralimbic cortex (တွေကိုတုံ့ပြန်မှုFleming ကနှင့် Korsmit, 1996), circuitry ၏တိကျသောဒေသ၏အရေးပါမှုကိုအကြံပြုခြင်း။
မွေးကင်းစကလေးတွေကိုထိတွေ့သည့်အခါဦးနှောက်အတွက်ကျယ်ပြန့်လှုပ်ရှားမှုအားစောင့်ကြည့်ပေမယ့်လူ့မိခင်များအတွက်သည်, OFC ယုံကြည်စိတ်ချရသောလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအတွက်စေ့စပ်ခံ, မိဘအုပ်ထိန်း circuitry အတွက်အမာခံဒေသအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသည်။ မိခင်များအဖြူဆူညံသံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါမွေးကင်းစကလေးအော်ဟစ်စကားကိုနားထောငျတဲ့အခါမှာညာဘက် OFC အတွက်လုပ်ဆောင်ချက် (ကြီးLorberbaum et al ။ , 1999, 2002) နှင့်မိခင်တစ်ဦးကျွမ်းတဝင်မရှိသောသူငယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သူငယ်၏ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုအားပေးသည့်အခါနှစ်နိုင်ငံ OFC လှုပ်ရှားမှု (တိုးလာNitschke et al ။ , 2004) ။ မွေးကင်းစကလေးမျက်နှာများကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်နှင့် Self-အစီရင်ခံစိတ်ဓါတ်များပေါင်းကူး, အ OFC ၌ဤနှစ်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုသိသိသာသာ (အပြုသဘောစိတ်ဓါတ်များရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းသိရသည်Nitschke et al ။ , 2004), လက်ဝဲ OFC လှုပ်ရှားမှုတစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုမှာအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်ရမှတ်များနှင့်အတူ correlating အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်နှင့်ညာဘက် OFC လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ correlating နှင့်အတူ (Noriuchi et al ။ , 2008) ။ ဒီအဆုံးစွန်သောအစီရင်ခံစာတွင်အခြားဒေသများအတွက် dorsolateral PFC, insula, putamen နှင့် PAG အပါအဝင်မွေးကင်းစကလေးကျွမ်းမှ sensitivity ကိုပြသခဲ့သည်။ preclinical အလုပ်ခုနှစ်, PAG suckling ခွေးများထိတွေ့ကတည်းကသူနာပြုများ၏ရွေ့ရပ်တည်ချက်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ထင်နေသည်ရွေးချယ် (Non-နို့စို့ခွေးများထိတွေ့ထက် သာ. ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာအထိ PAG မြှင့်လုပ်ဆောင်Lonstein နှင့် Stern ပာ, 1997) ။ အဆိုပါ PAG ကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန် (အရွှေ့ဆိုင်ကာလ၌ရန်လိုသည့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ကြောက်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ဖြန်ဖြေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးLonstein et al ။ , 1998) ။ ဒါဟာ OFC (နှင့် PAG) သည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် striatum, insula နှင့်မိခင်နှင့်ရင်ခုန်စရာပူးတွဲမှု၏တွေကိုတုံ့ပြန် dorsal ACC (အပါအဝင်ထပ်ဒေသများနှင့်အတူမိခင်ကို attachment ၏တွေကိုမှရွေးချယ်တုံ့ပြန်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ရကျိုးနပ်သည်Bartels နှင့် Zeki, 2004) ။ Magnetoencephalography လည်းမွေးကင်းစကလေး cue sensitivity ကိုရန် OFC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုသရုပ်ပြခြင်းနှင့်နောက်ထပ် (OFC မွေးကင်းစကလေးမျက်နှာအမြင်အပေါ်တစ်ဦးထိပ်တန်း-Down အခန်းကဏ္ဍကွိုးစားအားထုစေခြင်းငှါအကြံပြုထားပါတယ်Kringelbach et al ။ , 2008) ။ နှစ်ဦးစလုံးမိဘများနှင့် Non-မိဘများ, 130 ms Post-လှုံ့ဆော်မှုစတင်ခြင်းင်တစ်ဦးနမူနာခုနှစ်တွင်မွေးကင်းစကလေးမျက်နှာများသော်လည်းမအရွယ်ရောက်ပြီးသူမျက်နှာများကြည့်ရှုရန်တုံ့ပြန်မှုအတွက် mOFC အတွက်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းသိသိသာသာတိုးရှိ၏။ ထိုမှတပါး, မွေးကင်းစကလေးမျက်နှာများအားဤအစောပိုင်း sensitivity ကိုအစဉ်အလာမျက်နှာအပြောင်းအလဲနဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာ fusiform cortex) နဲ့ဆက်စပ်ဒေသများရှိစောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, မကျြနှာကိုတင်ဆက်ကနေ 165 ms ပြီးနောက်, fusiform cortex အတွက်မွေးကင်းစကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမျက်နှာများတုံ့ပြန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်မတူကွဲပြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် mOFC မွေးကင်းစကလေးတွေကိုသာထိခိုက်မခံသည်မဟုတ်, အစမွေးကင်းစကလေးမျက်နှာလှုံ့ဆော်မှု၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် fusiform ဒေသများတွင်နောက်ဆက်တွဲလှုပ်ရှားမှု modulate စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ယင်းကို MB အထောက်အကူပြုနိုင်သည်ကိုနောက်ထပ် forebrain ဒေသအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula (LHb ဖြစ်၏ Geisler နှင့် Trimble, 2008) ။ LHb လှုပ်ရှားမှုကြိုးများနှင့်စိတ်ပျက်စရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ saliency နှင့်တန်ဖိုး processing များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုသည်မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်မရှိခြင်းအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ (အထပ်ထပ်ထိတွေ့အောက်ပါအဆိုပါ LHb ရှိုးစူးရှသောကိုကင်းနှင့်အကင်း-ဆက်စပ်တွေကိုမှက c-FOS တိုးမြှင့်သျောလညျးဤတုံ့ပြန်မှုမှေးမှိန်Franklin နှင့် Druhan, 2000), ကိုကင်းထိတွေ့ VTA လှုပ်ရှားမှုလျော့ဖို့ LHb များ၏စွမ်းရည်ကို disrupts ကြောင်းအကြံပြု။ VTA အာရုံခံမွေးကင်းစကလေးလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ထပ်မံမပြောင်းနိုင်သောပစ်ခတ်ရန်တစ်ဦးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီလျှင်ဤသည်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံ (PPD7 အပေါ်ခွေးများတုံ့ပြန် activated နှင့် PPD 10 အပေါ်တွေကို pup မှဓာတ်ပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်Felton et al ။ , 1998) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အက c-FOS တုံ့ပြန်မှုခွေးများဘို့ခိုင်ခံ့ CPP ကပြကြောင်းဆည်အတွက်လျော့နေသည်။ ဤ (အနုတ်လက္ခဏာဆုလာဘ် salience အတွက် LHb ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါMattson နှင့် Morrell, 2005) ။ အဆိုပါ LHb လည်း (MB အထိအောက်ပါ excitatory input ကိုနှင့် output ကိုနှစ်ဦးစလုံးရှိသည်ဖို့ပြသထားသည်Geisler နှင့် Trimble, 2008) ။ ကရွှေ့ဆိုင်နေစဉ်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောလှုံ့ဆော်မှုများ salience အဆုံးအဖြတ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်ဤသည်အနာဂတ်သုတေသနတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, core ကိုအဆောက်အဦတစ်ခုအရေအတွက်ဆုလာဘ်အာရုံကြော circuitry အတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးကျနော်တို့မိဘအုပ်ထိန်းသူတို့ရဲ့ adapter အကြံပြုဖို့သက်သေအထောက်အထားဖော်ပြထားပါပြီ။ ကိုကင်းများကထိုအ neurocircuits ၏မော်ဂျူပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုမိဘအုပ်ထိန်းအပြုအမူကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်မှတဆင့်တစ်ဦး neurobiological လမ်းကြောင်း implicates ။ အကျိုးကို circuitry ၏အခန်းကဏ္ဍကို, အထူးသ mesocorticolimbic DA လည်း (MB နဲ့ pair တစုံဘွန်း၏ preclinical လေ့လာမှုများပိုမိုကျယ်ပြန့်လူမှုပူးတွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးInsel, 2003) ။ ဤသည်ကိုကင်းမိခင်ကို attachment ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသကဲ့သို့ကောင်းစွာ MB အထိသြဇာလွှမ်းမိုးပုံကိုနားလည်ရန်အနာဂတ်သုတေသနအတွက်အရေးပါသော Avenue ရှိလိမ့်မည်။
အကျိုးကိုအာရုံကြောဆားကစ်များအပြင်လူသားများနှင့်ကြွက်အနှံ့ကို MB အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု neurocircuits ၏သိသာထင်ရှားသောစုဆောင်းမှုလည်းရှိသေး၏။ ထိုမှတပါး, အမူအကျင့်အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးဥစ္စာဓန (မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့် relapse အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု implicatesCorominas et al ။ , 2010; Koob နှင့် Volkow, 2010) ။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်, ကို MB အတွက်၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ကိုကင်းများကမော်ဂျူ၏အာရုံကြော circuitry ကြှနျတျောတို့၏အာရုံကိုလှည့်။
extrahypothalamic စိတ်ဖိစီးမှု circuitry [BNST, hippocampus, NAc ၏ medial ဆက်ဆံနှင့်ဗဟို amydala (CeA)] ပုစိတ်ခွန်အားနိုးတစ်ဦးထက်ပိုသောအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဖို့ပုံပေါ်နေချိန်တွင်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်ကဝင်ရိုးကို Canon HPA မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍဟန် စူးရှသောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse (နှစ်ဦးစလုံး၏ဆိုးကျိုးများAston-ဂျုံးစ်နှင့် Harris က, 2004; Corominas et al ။ , 2010; Koob နှင့် Volkow, 2010) ။ ဒါဟာ (ဆုလာဘ်လုပ်ငန်းများ၌ဘယ်လိုတစ် neuroadaptational ပြောင်းကုန်ပြီကနေစွဲလမ်းရလဒ်များကိုတစ် Basal circuit ကိုအတွင်းအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ခြင်းဖြင့်အပြုသဘောအားကောင်းနှင့်အစားထိုး၏အထူးဆုံးရှုံးမှုအတွက်တိုးချဲ့ amygdala ချေါကြောင်းတွေးဆထားသည်Koob နှင့် Volkow, 2010) ။ မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များဖြစ်စေအောက်ပါပုံကိုဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဤသည်ကြာရှည်ပြောင်းကုန်ပြီအလားတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကို (allostasis) (allostatic ဝန်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးMcEwen နှင့် Gianaros, 2011) ။ allostatic ဝန်အတွက် ALTER စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဇီဝကမ္မဖိအားနာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်ဆင်းသက်လာကြသည်။
acute, အ HPA ဝင်ရိုးပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်းဖြစ်ရပ်များအမျိုးမျိုးအားဖြင့် activated ဖြစ်ပါတယ် (ပုံကိုကြည့်ပါ 5) ။ အဆိုပါ hypothalamus အတွက် PVN အဆိုပါပျံ့နှံ့နေတဲ့အသွေးတော်ထောက်ပံ့ရေးသို့ pituitary gland ကနေ adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (ACTH) ၏ဖြန့်ချိလှုံ့ဆော်ခြင်း, hypophyseal အသွေးတော်ထောက်ပံ့ရေးသို့ CRF ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်မြောက်မြားစွာဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှုပြုပြင်ဘယ်မှာစောင်ရေသို့; ACTH glucocorticoids (GC), ဆိုလိုသည်မှာ cortisol (လူသားမြားသညျ) သို့မဟုတ် corticosterone (ကြွက် CORT) ကိုလွှတ်ဖို့ adrenal medulla အပေါ်ပြုမူ။ အရေးကြီးတာက, CORT homeostasis မှစနစ်ပြန်လာ, GC အဆိုပါ pituitary အတွက် activation, PVN နှင့် hippocampus မှတဆင့်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ပြုပြင်။ ထိုအသွေးသို့ CRF ၏လွှတ်ပေးရန်အပြင်, PVN အာရုံခံ (ဥပမာ BNST, CeA နှင့် VTA ကဲ့သို့သောအခြားဗဟိုအာရုံကြောစနစ်က်ဘ်ဆိုက်များမှပရောဂျက်Palkovits et al ။ , 1998; Rodaros et al ။ , 2007), (ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှုသူတွေကိုဦးနှောက်ဒေသများတွင်အာရုံခံတုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိလာတဲ့ Corominas et al ။ , 2010) ။ အဆိုပါ PVN reversibly ( သာ. ကြီးမြတ် excitatory input ကိုခွင့်ပြုကိုယ်ဝန်နှင့်နို့ကာလအတွင်းဖွဲ့စည်းပုံ remodelsPanatier နှင့် Oliet, 2006), သောဤဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတွက်အပြောင်းအလဲများများအတွက်အထူးသဖြင့်ပြောင်းလဲနေသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်အကြံပြုထားသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဟာကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်း PVN တုန့်ပြန်ပွောငျးလဲလျှင်ဤ (အ PVN လည်း OT ထုတ်လုပ်ရန်ဆဲလ်များပေးထား deleterious သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့Slattery နှင့်နျူမန်, 2008), နှင့် PVN PPD7 ခြင်းဖြင့်ခွေးများတုံ့ပြန်ကိုသက်ဝင်တွေ့ရှိထားပြီး (Fleming ကနှင့် Korsmit, 1996; Febo et al ။ , 2005).
ပုံ5။ အဆိုပါကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှု circuitry။ အဆိုပါ hypothalamus အတွက် paraventricular နျူကလိယ (PVN) corticotrophin releasing ဗဟို amygdala (CeA) မှအချက် (CRF) ပရောဂျက် (အစိမ်းရောင်မြှား), အ stria terminalis (BNST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယကို၎င်း, pituitary gland ပေးပို့သည်။ အဆိုပါ pituitary သည့် adrenal gland မှသွားရောက်ကာသောအသွေးတော်စမ်းချောင်းသို့ဖြန့်ချိ adrenocorticotrophic ဟော်မုန်း (ACTH) ဂလင်း။ Adrenal ဂလင်းသွေးကြောထဲသို့ corticosterone (CORT) ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ CORT အဆိုပါ pituitary အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်ချက် signal ကို (အနီရောင်မြှား), PVN အဖြစ်ပြုမူခြင်း, hippocampus, အ PVN (အစိမ်းရောင်လိုင်းမြှား) မှ excitatory စီမံချက်များပို့ပေးရသော။ အဆိုပါ PVN အဆိုပါ CeA နှင့် BNST ထံမှနောက်ထပ် excitatory input ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ ကနေအဆင်ပြေအောင်ဦးနှောက်သိထား Paxinos နှင့် Watson (1997).
လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related symptomatology အကြားတစ်ဦးကိုထူထောင် bidirectional ဆက်ဆံရေးမျိုး (ရှိပါသည်Sinha, 2001; Goeders, 2002; Koob နှင့် Volkow, 2010) ။ ကိုကင်း acute (ထို HPA ဝင်ရိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်Goeders, 2002), တစ်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးသမီးလိင်ဟော်မုန်းအားဖြင့် upregulated ကြောင်း (Russo et al ။ , 2003), ကြောင်းကိုယ်ဝန်အကြံပြုခြင်းများနှင့်ပူးတှဲမြင့်မားသောအမျိုးသမီး Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းပျံ့နှံ့နေတဲ့, ကိုကင်း-သွေးဆောင်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုများအတွက်အထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံကာလဖြစ်နိုင်သည်။ နာတာရှည်သက်ရောက်မှုကုသမှုစစ်အစိုးရအပေါ်မူတည်; မူးရူးထိုးဖို့ ACTH နှင့် CORT တုံ့ပြန်မှုထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု (ကျော် habituate ဘူးပေမယ့်ဥပမာအားဖြင့်, HPA တုံ့ပြန်မှုနေ့စဉ်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှ habituate မဟုတ်သလို sensitize မGoeders, 2002) ။ သို့သျောလညျးကိုကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုတိုးလာ CORT တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့် PVN အတွက်အနိမ့် GC receptors နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ကြောင်းအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်လျော့နည်းသွားဒါပေမဲ့တခြားမဟုတ် forebrain ဒေသများ (Rodaros et al ။ , 2007), နဲ့အခြားဦးနှောက်စင်တာများကိုညွှန်းဆက်လက်တုန့်ပြန်ပြနိုင်ပါတယ်။ HPA reactivity ကိုစူးရှသောရုပ်သိမ်းရေးနှင့် dysregulation ကာလအတွင်းကြီးထွားနေသည်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence ကာလအတွင်းဆက်ရှိနေသေး (Goeders, 2002; Corominas et al ။ , 2010) ။ အရေးကြီးတာက, နာတာရှည်ကင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သိသိသာသာ CORT အဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ် (Quinones-Jenab et al ။ , 2000), တုံ့ပြန်ချက်စည်းမျဉ်းအပေါ်သက်ရောက်မှုလျော့နည်းရှင်းပါတယ်ပေမယ့်။ complementary ဒေတာ (စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် HPA အချက်ပြ psychostimulant Self-အုပ်ချုပ်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်မပြသခဲ့သည်Goeders, 2002), စိတ်ဖိစီးမှုဟာကိုရွှေ့ဆိုင်အတွက်ရှာကြံနောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါတစ်ယန္တရားကိုညွှန်း။
ကို MB အတွက် HPA စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်၏အခန်းကဏ္ဍပဲနားလည်သဘောပေါက်ခံရဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်, ထိုသို့တင်းကျပ်စွာစည်းမျဉ်းကိုယ်ဝန်, နို့နှင့်နို့ဖြတ်ကနေအကူးအပြောင်းတစ်လျှောက်လုံးပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းရှင်းပါတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း allostasis သို့မဟုတ်ကာလအစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖို့ HPA နှင့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ၏ dynamic တုံ့ပြန်မှု, ဖြစ်ကောင်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, သို့သော်, allostatic ယန္တရားများ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာကြီးမြတ်လိုအပ်ချက်၌ရှိကြ၏။ ကိုယ်ဝန်နှင့်ကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလမြင့်မား Basal CORT အဆင့်ဆင့်အားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုတစ် hyporesponsive ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုသွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်အနိမ့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်ဆင့် (နေကြတယ်Slattery နှင့်နျူမန်, 2008) ။ မိခင်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများ (မိခင်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်လိုငွေပြမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းပြီSmith က et al ။ , 2004; Bosch ရဲ့ et al ။ , 2007; ချန် et al ။ , 2010) ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုကြွက်များတွင် MB အထိလျှော့ချနိုင်ကြွက်အနိမ့်ကို MB ရှိသည်ဖို့ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်လျှင်, သို့သော်, စိတ်ဖိစီးမှု (အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုသာအချို့သောအတိုင်းအတာအထိလျှော့ချနိုင်အကြံပြုခြင်း, သူတို့ကိုမထိခိုက်ခဲ့ပါရှမ်ပိန်နှင့် Meaney, 2006) ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သို့မဟုတ်နို့တိုက်ကြွက်မှ CORT စီမံခန့်ခွဲ (သူနာပြုနှင့်တိုးလျစ်လျူရှုအပြုအမူတွေကိုလျော့နည်းစေBosch ရဲ့ et al ။ , 2007; Brummelte နှင့် Galea, 2010) ။ ယင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်းထပ်ခါတစ်လဲလဲဖိအားတိုက်ရိုက်ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုအကြံပြုခြင်း, ကြွက်များတွင်နို့တားစီးနိုင်ပါတယ် (Lau နဲ့ Simpson, 2004) ။ ပြောင်းပြန်လည်ပတ်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းဖယ်ရှားခြင်းလျော့နည်းစေပေမဲ့ကို MB (ဖျက်ပယ်မထားဘူးRees et al ။ , 2004) ။ နို့ရံ OT အဆင့်ဆင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်နှင့် OT directionally bi-လျှော့ချစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုမှဦးဆောင်နာတာရှည် OT ကုသမှု (အတူ HPA လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်မှလူသိများသည်Uvnas-Moberg et al ။ , 2005), (OT ယင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှု hyporesponsiveness ဖျန်ဖြေကိုကူညီစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းSlattery နှင့်နျူမန်, 2008).
စိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အတော်များများ neurotransmitters (5-HT, DA, NE vasopressin, ညီလေးနှင့် CRF အပါအဝင်အစောပိုင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်းပြောင်းလဲနေကြသည်Slattery နှင့်နျူမန်, 2008) ။ ဤရွေ့ကားအချက်ပြမှုများစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, အထူးသဖြင့် CRF နှင့် OT လွှတ်ပေးရန်ညွှန်ကြားဖို့ PVN အတွင်းအဓိကအားဖြင့်ပြုမူ။ CRF (ထို HPA ဝင်ရိုးကိုသက်ဝင်အသုံးပြုပုံဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်ပတျဝနျးကငျြ, အတိုးချဲ့ amygdala နှင့် VTA မှအချက်ပြတွေကိုတိုးမြှင့် saliency အတွက်ရရှိလာတဲ့မှတဆင့်သာက "စိတ်ဖိစီးမှု" signal ကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်Gulpinar နှင့် Yegen, 2004; Corominas et al ။ , 2010) ။ ဒါဟာ (စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်ရွှေ့ဆိုင်ပြောင်းလဲမှုများ PVN အတွက် CRF ထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီSlattery နှင့်နျူမန်, 2008), ယူဆရစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန် CRF mRNA ၏ upregulation attenuate နိုင်သည့်အဆင့်မြင့် OT အဆင့်ဆင့်, (မှတဆင့်Lightman et al ။ , 2001; Windle et al ။ , 2004) ။ Mutant mouse ကိုလိုင်းများကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများတစ်စီးရီးမှာတော့ Gammie နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ CRF အချက်ပြ (MB ၏အစိတ်အပိုင်းများကို modulates ကြောင်းပြသကြGammie et al ။ , 2007, 2008b; D'အန်နာနှင့် Gammie, 2009) ။ ၏ပစ်မှတ်ထားနှောင့်အယှက် CRFR1 သိသိသာသာလျှော့ချသူနာပြု, နေစဉ် CRFR2 နောက်ကောက်ပြပွဲနေထိုင်သူတစ်ဦး-ကျူးကျော်စမ်းသပ်မှုများတွင်မိခင်ကျူးကျော်လျှော့ချရှိထားတယ်။ တစ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောကျူးကျော်ထိတွေ့နေတဲ့ရေကာတာများအတွက်အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကက CRF function ကိုဆိုးရွားသောသို့မဟုတ် anxiogenic အခြေအနေများနှင့်ဆက်စပ်သောကို MB ဘို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထပ်ထပ်ကိုကင်းကုသမှုနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာအဖြစ် CRF-mediated အချက်ပြအတွက် ALTER, (Corominas et al ။ , 2010), အရှင်သာမန်အမျိုးအနွယ်ကိုကာကွယ်ရေးနှောင့်အယှက်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့အခုစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, စွဲလမ်းနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသောသော့ချက်အာရုံကြောဒေသများထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုလာဘ် circuitries အကြားအရေးကြီးသောအပြန်အလှန်သုံးသပ်မတိုင်မီအထူး hippocampus နှင့်တိုးချဲ့ amygdala ။
Hippocampal လှုပ်ရှားမှု (အ PVN မှ ventral hippocampal အာရုံခံ '' တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်တစ်ဦး inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြုပြင်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းလွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိHerman et al ။ , 2005) ။ အဆိုပါ hippocampus Spatial နှင့်လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်ညှိနှိုင်းအဖြစ်ကိုယ်ဝန်နှင့်နို့စဉ်အတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုမှပံ့ပိုးအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြံပြုသည် mPFC, ACC, နောက်ကျနေခဲ့သည်နှင့်အခြားအသင်းအဖွဲ့ cortical အတူ entorhinal cortex ကနေတစ်ဆင့်အပြန်အလှန် excitatory ဆက်သွယ်မှု, ရှိပါတယ်။ နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ monoamine အချက်ပြအဖြစ်အများအပြား kinase အချက်ပြလမ်းကြောင်း (ပွောငျးလဲDworkin et al ။ , 1995; Freeman က et al ။ , 2001), ကိုကင်း PVN စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်လျော့ပါးဖို့ hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးရဲ့စွမ်းရည်ကိုနှိမ့်ချ-ထိန်းညှိခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။
အဆိုပါ hippocampus ပြပွဲ pup နို့စို့ (တုန့်ပြန် BOLD signal ကိုတိုးမြှင့်Febo et al ။ , 2005), ဤဧရိယာ၏တွေ့ရှိရပါသည်အထူးသ (MB အထိနှောင့်အယှက်လိမ့်မယ်Kimble et al ။ , 1967), ဖြစ်ကောင်းသူနာပြုများအတွက်လုံခြုံနေရာများတွင်သင်ယူများအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း။ အဆိုပါ hippocampus တိုက်ရိုက်ကပ်လျက်အဆိုပါ entorhinal cortex, pup နို့စို့ (ရန်အပြုသဘော BOLD တုံ့ပြန်မှုထားပါတယ်Febo et al ။ , 2005), လူမှုရေးမှတ်ဉာဏ်တစ်ခုပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုညွှန်း။ အဆိုပါ hippocampus အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ neurogenesis (မိခင် sensitized ကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ CORT အဆင့်ဆင့်မှချည်ထားသောတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်သည်Pawluski နှင့် Galea, 2007), နှင့်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းတွင်အောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိဘာဆင်တူသည် (Venkatesan et al ။ , 2007), ဒီစမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲပေမယ့်ကင်းထိတွေ့မှုကနေတိုးပွားလာ CORT ပင်ထပ်မံ neurogenesis လျော့ကျစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။ Hippocampal monoamine အဆင့်ဆင့်ကိုယ်ဝန်တစ်လျှောက်လုံးကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ကိုကင်းထိတွေ့အောက်ပါဘူး (Lubin et al ။ , 2003; Olazabal et al ။ , 2004), function ကိုအတွက်အလားအလာရှိသောအပြောင်းအလဲများ CRF နှင့် CORT အချက်ပြအပေါ်မှီခိုခြင်းအလိုငှါညွှန်ပြ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ညီလေးအဆင့်ဆင့် (နာတာရှည်ကိုယ်ဝန်ကိုကင်းထိတွေ့အောက်ပါကညာကြွက်များနှင့်ကိုရွှေ့ဆိုင်ထဲမှာ hippocampus အတွက်ယုတ်လျော့နေကြတယ်Johns et al ။ , 1997a; Lubin et al ။ , 2001), အရာ CRF နှင့် CORT နှင့်အတူအပြန်အလှန်အဖြစ်အကြံပြုလိမ့်မည်။
အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala (မော်တာစနစ်များဖို့ limbic input ကိုသနျ့စ, processing စိတ်ခံစားမှု (အထူးသဖြင့်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်) ကိုအထောက်အကူပြုရန်Alheid, 2003; Koob နှင့် Volkow, 2010) နှင့် HPA ဝင်ရိုး function ကိုအတူ cortical အချက်အလက်များ၏ပေါင်းစည်းမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala ကို (CeA, medial amygdala (MEA), sublenticular တိုးချဲ့ amygdala, BNST နှင့် medial နှင့် NAc ၏ caudal ဝေမျှပါဝင်ပါသည်Alheid, 2003) ။ အဆိုပါ CeA နှင့် BNST (ထို PVN နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်နှင့် CRF တစ်ခုလွတ်လပ်သောအရင်းအမြစ်များမှာAlheid, 2003) ။ ဤအဒေသများတွင် CRF လှုပ်ရှားမှုအတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများကို (ထဲမှာကိုကင်းထိတွေ့မှုရလဒ်များကိုCorominas et al ။ , 2010) ။ နာတာရှည်ကင်းကုသမှု (ယောက်ျားအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုကိုတုံ့ပြန်အတွက် amygdala နှင့် BNST အတွက် CRF-မှီခို activation တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့အာရုံခံတုံ့ပြန်မှုအပေါ်ရေတိုနှင့်ရေရှည်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်Kash et al ။ , 2008); သို့သော်အမျိုးသမီးအပေါ်သက်ရောက်မှုလျော့နည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြသည်။ CRF ကကမကထပြုခဲ့အချက်ပြ (ကိုကင်းဆုလာဘ်တစ်ခုနာတာရှည်ကင်း regimen နှင့် reinstatement စဉ်အတွင်း neuroadaptation ်ပတ်သက်နေထားပြီးCorominas et al ။ , 2010) ။ ဤလုပ်ငန်းကိုတစ်အများစုကိုကင်းကနေဆုတ်ခွာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ပေမဲ့ကနာတာရှည်ထိတွေ့ CRF အချက်ပြပွောငျးလဲကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထို့အပြင်ဖိအားတုံ့ပြန်မှုအတွက် BNST အတွက်ကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲစေခြင်းငှါအရာ NE ၏အေးစက်လွှတ်ပေးရန်, (ထို့နောက်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်မှတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုကြီးထွားများပြားစေတော်မူသောစိုးရိမ်ပူပန်ခြီးမွှောစေခြင်းငှါAston-ဂျုံးစ်နှင့် Harris က, 2004; Koob နှင့် Volkow, 2010) ။ ယေဘုယျအားသက်သေအထောက်အထားဤလိုင်းများစွဲအတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု circuitry အကြားအရေးပါသော convergence အချက်အတိုင်းဤဒေသတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။ acute ကိုကင်း (အ amygdala အတွက်အချိန်ပိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်Elliott သည် et al ။ , 2001), ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နာတာရှည်ကင်းကုသမှုအစောပိုင်းကိုရွှေ့ဆိုင် (ထဲတွင် BNST နှင့် amygdala အတွက် binding ညီလေးအဲဒီ receptor လျော့ကျစေပါတယ်စဉ်Johns et al ။ , 2004; Jarrett et al ။ , 2006).
တိုးချဲ့ amygdala လှုပ်ရှားမှုအတွင်းပြတ်တောက်ကို MB အပေါ်အဓိကထိခိုက်သက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ amygdala နှင့် BNST ဒေသ activation (MB အတွက်လျှောက်လျော့နည်းစေနိုင်သည်Rasia-Filho et al ။ , 2000; Walker က et al ။ , 2003; Bosch ရဲ့ et al ။ , 2005) ။ အထူးသဖြင့်, ထို MEA ၏ activation ခွေးများချဉ်းကပ်ရာမှဆည်တားစီးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် (မိခင်လျစ်လျူရှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ mouse ကိုဆည်ဟာ MEA အတွက်မြင့်မားတဲ့က c-FOS စကားရပ်ရှိသည်နှင့် CeA ဆည်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါNuman, 2007; Gammie et al ။ , 2008a) ။ အဆိုပါ MEA နှင့် cortical amygdala (CeA) (ပထမအပတ်ကိုရွှေ့ဆိုင်နေစဉ်အတွင်း, ဒါပေမယ့်မရ pup တွေကိုထိတွေ့ခြင်းဖြင့်ခွေးများထိတွေ့ခြင်းအားဖြင့် activated နေကြတယ်Fleming က et al ။ , 1994a; Fleming ကနှင့် Walsh, 1994b; stack et al ။ , 2002) ။ အဆိုပါ basolateral amygdala (BLA) PPD3 သည်အထိ activated နှင့် PPD10 အပေါ်တွေကိုတုံ့ပြန်မှု, cue-သင်ယူခြင်း (၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုက်ညီသည်မဟုတ်Pego et al ။ , 2008) ။ အဆိုပါ Amy အတွက် OT (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်မိခင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူထိန်းညှိဘို့အရေးကြီးပါတယ်နှင့်နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့အောက်ပါတိုးပွါးBosch ရဲ့ et al ။ , 2005; McMurray et al ။ , 2008) ။ ယင်းကိုရွှေ့ဆိုင်အတွင်းတိုးချဲ့ amygdala အတွက်ဖြစ်ပေါ်ရှုပ်ထွေးအပြောင်းအလဲများကိုပေးထားသောကြောင့်ယခင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအလုပ်လုပ်တဲ့ plasticity ၏ပုံမှန်သင်တန်းကြားဖြတ်စေခြင်းငှါဖွယ်ရှိသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုကြေး circuits များ၏ Interaction
အရေးကြီးတာက, စိတ်ဖိစီးမှုအကျိုးကို circuitry ပွောငျးလဲ။ ဆုလာဘ် circuitry function ကိုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အလေးပေးအဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အတွက် CRF အချက်ပြအာရုံစိုက်ခဲ့ပေမဲ့ GC activation အဖြစ်ကောင်းစွာအရေးကြီးပါသည်။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု (psychostimulant ထိတွေ့အောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိဘာနဲ့ဆင်တူသည့် NAc shell ကိုနှင့် VTA အတွက် glutamatergic အချက်ပြခြင်းနှင့် Synaptic function ကိုတိုးပွားစေMeshul et al ။ , 1998; Campioni et al ။ , 2009; Lodge နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005) ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် VTA လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများနှင့် NAc DA လွှတ်ပေးရေး (CRF နှင့် CORT နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်မှီခိုနေကြCleck et al ။ , 2008; Kash et al ။ , 2008) ။ GCs (အထူးသဖြင့်နို့တိုက်ကြွက်များအတွက် NAc အာရုံခံအတွက် DA မှ sensitivity ကို modulate နိုင်ပါတယ်der-Avakian et al ။ , 2006; Byrne et al ။ , 2007) ။ psychostimulants ဖို့ NAc မလွဲမသွေအတွက် GCs ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကိုယ်ဝန်နှင့်နို့စဉ်အတွင်း GC ပျံ့နှံ့နေတဲ့၏ကြီးမားသောငွေပမာဏ (ပေးသော, အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်Byrne et al ။ , 2007) ။ အဆိုပါကူးယူအချက် CREB (စွဲလမ်းသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရပ်များ၏မူးယစ်ဆေးထိတွေ့အောက်ပါဦးနှောက်ထဲမှာမြဲအပြောင်းအလဲများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့ပြီး, နှင့်ဆုလာဘ် circuitry တစ်လျှောက်လုံးထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်Briand နှင့် Blendy, 2010) ။ phosphorylated CREB ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့် (ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အကဲဆတ်ခြင်းစူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အရေးပါသောယန္တရားဖြစ်နိုင်သည်Briand နှင့် Blendy, 2010), နှင့် conditional တုံ့ပြန်မှု၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက်ကင်းရန် (Kreibich နှင့် Blendy, 2004) ။ ၏နှောင့်အယှက် CREB function ကို (ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှပိုမိုမြင့်မား sensitivity ကိုဦးတည်သွားစေပေမယ့်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဖြစ်စဉ်များကိုအောက်ပါမူးယစ်ဆေး-related အပြုအမူ၏အလားအလာ disrupts နိုင်ပါတယ်Dinieri et al ။ , 2009), စဉ်တွင် CREB overexpression (ကိုကင်းများ၏ locomotor သက်ရောက်မှု attenuate နိုင်ပါတယ်Kreibich et al ။ , 2009; Briand နှင့် Blendy, 2010) ။ CRF အဲဒီ receptor 1 မှတဆင့်ပြ၏နှောင့်အယှက်ကင်းစေရန် conditional တုံ့ပြန်မှု၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်ပိတ်ဆို့အဖြစ် phosphorylated CREB အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-ရူးနှမ်းတိုးနိုင်ပါတယ် (Kreibich et al ။ , 2009) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီဒေတာစိတ်ဖိစီးမှုအချက်ပြအတွင်းကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုမိခင်တုံ့ပြန်မှုကိုထိခိုက်ဖို့ဆုလာဘ် circuitry ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူများ၏ညှိနှိုင်းဆက်ဆံစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့က allostatic ဖြစ်စဉ်များများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် hippocampus အကြားညှိနှိုင်းအချက်ပြလိုအပ်သည်အဆိုပြုချက်ကို, amygdala နှင့် PFC (မှတ်သားရန်အရေးကြီးပါသည်McEwen နှင့် Gianaros, 2011) ။ ဤဒေသများသည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စတင်နှင့်ကို MB ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှတုံ့ပြန်မှုများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပြီး, အဆိုးကိုကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်ထိခိုက်နေကြသည်, သူတို့ကမူးယစ်ဆေး-ထိတွေ့မိဘအုပ်ထိန်းမော်ဒယ်များအတွက်နောက်ထပ်သုတေသနထိုက်ကြောင်းဒေသများမီးမောင်းထိုးပြ။ ကတည်းက
ကျနော်တို့ကဒီမှာပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသကဲ့သို့, ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ၏အာရုံကြော circuitry ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုစတင်အဖြစ်ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲမှီခိုရန်ကူညီသည်။ ဤအ circuits များအတွင်းသော့ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာအဆောက်အဦများ၏အတော်များများလည်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမိဘအုပ်ထိန်းအပြုအမူ modulate နိုင်သည့်မှတဆင့်ယန္တရားများအဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်သည်ဤထပ်အာရုံကြောဆားကစ်ကြောင့်အကြံပြုမိဘအုပ်ထိန်း၏လေ့လာမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာလျက်ရှိသောသူတို့ကိုဖြစ်ကြသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်အားမိတ်ဆက်အတွက်တင်ဆက်သည့်မော်ဒယ်နှင့်ပတ်သက်သောဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ပုံအတွက်တင်ပြကြသည် 6။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်၏နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းစွဲအခြေအနေမှာ, မွေးကင်းစကလေးတွေကိုစိတ်ဖိစီးမှုထက်ကြိုးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, စိတ်ဖိစီးမှုများကြီးထွားအဆင့်ဆင့်အတိတ်အတွေ့အကြုံမှတဆင့်အနုတ်လက္ခဏာများ၏သက်သာချောင်ချိရေးကိုထိခိုက်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းအလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများအဘို့တဏှာတိုးပွါးကြောင်းကို posits ။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးမွေးကင်းစကလေးစောင့်ရှောက်၏လုပ်ရပ်လက်ရှိမိခင်များကို အသုံးပြု. မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်ရန်အဖြစ် abstinent မိခင်များအတွက် relapse ထွက်လာပါတယ်လိမ့်မည်။
ပုံ6။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းအကြားဆက်ဆံရေးအတွက်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများအခန်းက္ပ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို (စိမ်းပြာရောင်သေတ္တာများနှင့်မြှား) ၏နံပါတ်စေလူသိများသည်။ ဤအပြောင်းအလဲများအတွက်အမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝအခြေအနေတွင်ပေါ် မူတည်. လည်းကောင်းအသံချဲ့စက်သို့မဟုတ်ကျဆင်းလာပွောငျးလဲခွငျးအားဖွငျ့အချင်းချင်း (အနီကို double-တင်ရန်မြှား) ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများကနှောင့်အယှက်သည့်အခါအရေးကြီးသည့်အချက်မှာဤအပြောင်းအလဲများကိုလွတ်လပ်စွာ, မွေးကင်းစနှင့်ကြီးထွားစိတ်ဖိစီးမှု၏အကြိုးတန်ဖိုးလျှော့ sensitivity ကိုအတွက်ရလဒ်တွေကိုမိဘစောင့်ရှောက်မှုအပြုအမူတွေအထောက်အကူပြုပြနှင့်ပြီ။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု abstinent မိခင်များအတွက်ဆက်လက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် relapse မှဦးဆောင်မူးယစ်ဆေးတဏှာဖြစ်ပေါ်ဖို့လုံလောက်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရန်ရှာကြံမူးယစ်ဆေးကိုလည်းလျစ်လျူရှု၏သံသရာရှည်စေနိုင်သည်။
တစ်ဦး neurobiological အဆငျ့မှာမိဘအုပ်ထိန်း, စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများအကြားဆက်ဆံရေးက၎င်း၏နို့စို့အရွယ်၌တည်ရှိ၏။ သို့သော်ဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုကောင်းစွာ (စိတ်ဖိစီးမှု-related symptomatology နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Sinha, 2001), နှင့်အစောပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်မိဘအုပ်ထိန်းအပြုအမူပြောင်းလဲအဖြစ်မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပြီး (Webster-Stratton, 1990) ။ မိဘအုပ်ထိန်းအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတွေတိုးလာအဆင့်ဆင့်ကလေးတစ်ဦးစောင့်ရှောက်၏တောင်းဆိုချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်မလုံလောက်သောအရင်းအမြစ်များကို (ဥပမာ, ဝင်ငွေ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှု) နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ယုံကြည်ကြသည်, ဤမဟုတ်သောထက်စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်မြင့်သတင်းပို့သူကိုစွဲမိခင်များအတွက်တိုးမြှင့်ကြောင်း မိခင်များသုံးပြီးပစ္စည်းဥစ္စာ (ကယ်လီ, 1998) ။ ဒီ data စွဲမိခင်များအတွက်ကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှု allostasic ထိန်းချုပ်မှုအတွက် maladaptive ပြောင်းကုန်ပြီပြစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ အပိုဆောင်းသုတေသန (မိခင်အန္တရာယ်အချက်တွေအရေးပါသောဖျန်ဖြေအဖြစ်မိဘအုပ်ထိန်းစိတ်ဖိစီးမှုသက်သေများနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းအပြုအမူအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်Suchman နှင့် Luthar, 2001) ။ ဤရွေ့ကားကနဦးလေ့လာမှုများတစ်ဖိအားအဖြစ်မိဘအုပ်ထိန်း၏အယူအဆကိုထောကျပံ့, ကြှနျုပျတို့ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်မှအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်သောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်တဏှာအကြားဆက်ဆံရေးကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
စုဆောင်းသက်သေအထောက်အထားစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါပိုပြီးပြင်းထန်တဏှာနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီပြန်သွားကြသည်ဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတစ် maladaptive, Self-ကြူးတဦးတည်း (ဆိုသော်ငြားတဦးတည်းစိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်းများကိုဆိုလိုသည်ရရှိSinha နဲ့ Li, 2007) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေမှာတော့သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးလူ့ဖိအားထိတွေ့ကြသည်နှင့် hemodynamic တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲမှုများထို့နောက်တစ်ဦးကြားနေ Non-ဖိအားအခြေအနေထိတွေ့မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နေကြသည်။ Non-ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, စိတ်ဖိစီးမှုမှထိတွေ့မှုလက်ျာ mPFC နှင့် ventral ACC အပါအဝင် (1) တိုကျရိုကျဒေသများအတွက် hemodynamic တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီး, နှင့် posterior cingulate, left striatum, thalamus, နှစ်နိုင်ငံ caudate နှင့် putamen အပါအဝင် (2) limbic နှင့် midbrain ဒေသများ, နှင့် hippocampal နှင့် parahippocampal ဒေသများ left (Sinha et al ။ , 2004) ။ အတူတူသုတေသနအဖွဲ့ကနောက်ထပ်အလုပ် (Sinha et al ။ , 2005) ကို hemodynamic တုံ့ပြန်မှုတချို့အပြောင်းအလဲများကိုသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကိုကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်ဘုံရှိနေစဉ်ကင်း-မှီခိုသင်တန်းသားများကိုအစားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သို့တိုးချဲ့သောဤတူညီသောဒေသတွင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းများအနေဖြင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုသည် ACC အတွက်တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုပြသသောသရုပ်ပြ တိုကျရိုကျ cortex ။ အဆိုပါစာရေးဆရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အုပ်စုနှစ်စုနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေဤလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ဆက်ဆံရေးအကြားသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုစပ်လျဉ်း ACC လုပ်ငန်းဆောင်တာ၌ဤခြားနားချက်အနက်ကိုဘော်ပြ။ သူတို့ရဲ့အစောပိုင်းကတွေ့ရှိချက်ပုံတူ, စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက် hippocampal နှင့် parahippocampal ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုတိုးလာပေမယ့်ဒီတုန့်ပြန်မယ့်အစားနှစ်နိုင်ငံ dorsal striatum နှင့် caudate ဒေသတစ်ခုတိုးလာတုံ့ပြန်မှုပြခဲ့သူကိုကင်း-မှီခိုသင်တန်းသားများအတွက်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ အပြုသဘောစွဲ၌ဤဖွဲ့စည်းပုံရဲ့အခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုက်ညီ Self-အစီရင်ခံစာတဏှာရမှတ်များ, ဆက်နွယ်နေကြောင်းဒီအဆုံးစွန်သောဒေသတွင်း၌လုပ်ဆောင်ချက်။ လက်ဝဲ posterior နောက်ကျနေခဲ့သည်နှင့်သာလွန်ယာယီ sulcus လည်းကင်း-မှီခိုသင်တန်းသားများအတွက်တဏှာနှင့်အမှုရောက်သော Self-အစီရင်ခံစာအပေါ်ရမှတ်တိုးမြှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်း, လက်ျာ dorsolateral PFC အတွက်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်အဖြစ်။ ဤအတွေ့ရှိချက်များ၏သက်ရောက်မှုစွဲစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု modulates စဉ်လှုပ်ရှားမှု၏ဤမော်ဂျူတဏှာ, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စွဲအကြားတစ်ဦး putative link ကိုအကြံပြုခြင်း, မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏ Self-အစီရင်ခံစာများနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်, ထိုဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်နောက်ထပ် (relapse အောက်ပါစိတ်ဖိစီးမှုသော induction အောက်ပါတို့သည် medial PFC အပါအဝင်ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်, အသီးအသီးအခါသမယတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပမာဏနှင့်အတူ correlating, ပြန်သွားကြသည်ဖို့အချိန်ခန့်မှန်းကြောင်းရှာဖွေတာအဖြစ်ရက်ပေါင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏နံပါတ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အားဖြင့်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်Sinha နဲ့ Li, 2007) ။ ဤနေရာတွင်အသေးစိတ်ဖို့ကြီးမားလွန်းစာပေ၏တစ်ဦးကစည်းစိမ်ဥစ္စာ, တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအလားတူစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse အပြုအမူတွေ၏မော်လီကျူးယန္တယားနှင့်ဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်မှအရေးကြီး data တွေကို DA နှင့် CRF အဆိုပါ VTA, တိုးချဲ့ amygdala နှင့် PFC (များတွင်အရေးပါသောအချက်ပြမော်လီကျူးများဖြစ်ကြကြောင်းအကြံပြုကြသည်Erb, 2010; ဗန်တွင်း Oever et al ။ , 2010; ပညာရှိ Morales, 2010), အဖြစ် allostatic ဝန်မြားတှငျပွောငျးလဲနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိ။
Non-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်စွဲတစ်ဦးချင်းစီခွဲခြားနှင့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုစွဲများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုမှအားနည်းချက်၏အရေးပါမှုကိုညွှန်ပြတဏှာနှင့် relapse နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်းနိုင်သောဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ရလဒ်တွေကိုအလေးပေးဖို့နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ထိတွေ့မှုရှာဖွေခြင်း။ အထူးသညျဤလေ့လာမှုများစိတ်ဖိစီးမှုမှထိတွေ့မှုမူးယစ်ရှာကြံအပြုအမူနှင့် relapse အတွက်ရလဒ်များအရာတဏှာ heightens ကဖော်ပြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်ဤရလဒ်များကိုပေါင်းကူး, ငါတို့မိဘအုပ်ထိန်းတွေကိုဆင်တူစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကို (ဥပမာထုတ်ယူလိမ့်မည်ဟုအဆိုပြု ကယ်လီ, 1998) အရာအားဖြင့်ဖွယ်ရှိဒါအလွန်အမင်းမိခင်များ (ဥပမာမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲဆက်နွယ်နေကြောင်းသောလျစ်လျူရှုအပြုအမူမှပံ့ပိုးခြင်း, စွဲမိခင်များတွင်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူတွေကိုသွေးဆောင်နိုင်, ငွေကြေးနှင့် Wilkes, 2003) ။ ဒါဟာမျက်မြင်လက်တွေ့ဒီစူးစမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော preclinical နှင့်လူ့ဘာသာရပ်လေ့လာမှုများ၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤနေရာတွင်တင်ပြပြန်လည်သုံးသပ်ငါတို့သည်စွဲဤလမ်းကြောင်း၏မော်ဂျူအလေးပေးမိဘအုပ်ထိန်းများ၏အာရုံကြော circuitry မှဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလမ်းကြောင်း၏အလှူငွေဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ, မွေးကင်းစကလေးတွေကိုများ၏ saliency တိုးမြှင့်ဖို့ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းများအတွက်အဆင်ပြေအောင်ဖြစ်ကြောင်းအတူတူစနစ်များ၏ dysregulation အဖြစ်စွဲဖော်ပြထားပါပြီ။ ကျနော်တို့စွဲလမ်းခွအေနကေိုအတွက်မိဘအုပ်ထိန်းတွေကိုသူတို့ပုံမှန်အားဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့အစားစိတ်ဖိစီးမှုလိုက်လျောညီထွေယန္တရားများတစ်ဖြစ်နိုင်ခြေ dysregulation အတူတိုးပွားလာမူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့်လျစ်လျူရှုမိဘအုပ်ထိန်းအပြုအမူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရသော, စိတ်ဖိစီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့အကြိုးမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုတင်ပြသည်။ ကျနော်တို့ကိုကင်းစွဲအပေါ်ပိုပြီးတိတိကျကျအာရုံစူးစိုက်နေချိန်တွင်, ဒီမော်ဒယ်များ၏အခြေခံမူဖွယ်ရှိပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ Initiative နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုလာဘ်စနစ်များ၏ဘုံအခန်းကဏ္ဍမှမရှိစေရန်အခြားစွဲလမ်းဖြစ်စဉ်များအဘို့အကိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်လျော်သောကုထုံးကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်မိခင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု (ဥပမာကုသစဉ်းစားသည့်အခါထိုမှတပါး, စိတ်ဖိစီးမှု၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်အစောပိုင်းမိခင်ကလေးဆက်ဆံရေးအသိအမှတ်ပြုအရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည်, Pajulo et al ။ , 2006; Suchman et al ။ , 2008) ။ ဒါဟာမကြာသေးခင်ကမိခင်များအတွက်အလေးပေးဖို့အားနည်းချက်တစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အချိန်အတိုင်းအယူအဆဟာကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလလက်ဆောင်ကြောင်း supporting, ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများရှောင်မိခင်များအားဖြင့်အစောပိုင်းကိုရွှေ့ဆိုင်မြင့်မားသော relapse နှုန်းထားများအားဖြင့်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာကဒီမှာတင်ပြဆွေးနွေးစိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်းပစ်မှတ်ထားကြောင်းကုထုံးချဉ်းကပ်စွဲလမ်းအတွက် abstinence ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုများနှင့်လျစ်လျူရှု၏ဖြစ်ပွားမှုလျော့ကျလာ, မိဘဖို့စွမ်းရည်များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သူတို့စိတ်ဖိစီးမှု, စွဲလမ်းနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းများအတွက် key ကိုအချက်ပြစနစ်များဖြစ်ပြပြီအဖြစ်အလားအလာ neurobiological ပစ်မှတ် CRF နှင့် OT ပါဝင်သည်နိုင်ဘူး။
အဆိုပါစာရေးဆရာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကနေချီးမြှင့်အရေအတွက် P01DA022446 (ဂျိုးဇက်အမ် Johns) ကထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုသာစာရေးသူ၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်နှင့်သေချာပေါက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institutes အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏တရားဝင်အမြင်များကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ။
Adele, အေနှင့် Artigas, အက်ဖ် (2004) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာနှင့် afferent transmitter ကိုစနစ်များဖြင့်၎င်း၏စည်းမျဉ်းထဲမှာ dopamine ၏ somatodendritic လွှတ်ပေးရန်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 28, 415-431 ။
Afonso, VM က, Grella, SL, Chatterjee, ဃ, နှင့် Fleming က, AS (2008) ။ ယခင်မိခင်အတွေ့အကြုံကို pup-လှုံ့ဆော်မှုမှ accumbal dopaminergic တုံ့ပြန်မှုသက်ရောက်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1198, 115-123 ။
(2007) AS Afonso, VM က, Sison, အမ်, Lovic, V. နှင့် Fleming က။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် Medial prefrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မိခင်အမူအကျင့်များနှင့်၎င်းတို့၏ sequential အဖွဲ့အစည်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 121, 515-526 ။
Alheid, gf (2003) ။ တိုးချဲ့ amygdala နှင့် Basal forebrain ။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 985, 185-205 ။
Aston-ဂျုံးစ်, G. အများနှင့် Harris က, GC (2004) ။ အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာစဉ်ကရှာကြံတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးအဘို့အဦးနှောက်အလွှာဟာ။ Neuropharmacology 47 (ပျော့ပျောင်း။ 1), 167-179 ။
Bakermans-Kranenburg, MJ နှင့်ဗန် Ijzendoorn, MH (2008) ။ oxytocin အဲဒီ receptor (OXTR) နှင့် serotonin Transporter (5-HTT) လေ့လာမိဘအုပ်ထိန်းသူနဲ့ဆက်စပ်ဗီဇ။ Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ 3, 128-134 ။
ဘောလုံးကို, SA, Mayes, LC, DeTeso, ဂျာနှင့် Schottenfeld, RS (1997) ။ ကလေးက-based အကဲဖြတ်ကာလအတွင်းကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံးသတိ Maternal ။ နံနက်။ ဂျေစွဲ။ 6, 135-143 ။
Bartels, အေနှင့် Zeki, အက်စ် (2004) ။ မိခင်နှင့်ရင်ခုန်စရာစျြခွငျးမတ်ေတာ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ Neuroimage 21, 1155-1166 ။
Belej, တီ, Manji, ဃ, Sioutis, အက်စ်, Barros, HM နှင့် Nobrega, ဖြစ်မှု (1996) ။ နာတာရှည်ကင်းပြီးနောက် serotonin နဲ့ norepinephrine လွှာမှက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အပြောင်းအလဲများ: အကျူး vs. Post-ဆုတ်ခွာဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 736, 287-296 ။
ဘင်ရက်ရှာဟာ, O. , Keeley, P. , ကွတ်ခ်, အမ်, ဘရိတ်, ဒဗလျူ, Joyce, အမ်, Nyffeler, အမ်, Heston, R. နှင့် Ettenberg, အေ (2007) ။ IV ကိုကင်းမှအကျဉ်းချုပ်သို့မဟုတ်တိုးချဲ့နေ့စဉ်အသုံးပြုခွင့်ကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း D1, D2, ဒါမှမဟုတ် NMDA receptors ၏အဆင့်ဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1131, 220-228 ။
Berridge, KC (2004) ။ အမူအကျင့်မှ neuroscience အတွက်လှုံ့ဆျောမှုသဘောတရားများ။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 81, 179-209 ။
Berridge, KC, ရော်ဘင်ဆင်, TE နှင့် Aldridge, JW (2009) ။ ဆုလာဘ်များချက်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာအစိတ်အပိုင်းများ: 'အကြိုက်', 'လို' နှင့်သင်ယူမှု။ Curr ။ Opin ။ Pharmacol ။ 9, 65-73 ။
ဘလက်ဝဲလ်, P. , Kirkhart, K. , Schmitt, ဃ, နှင့်ခိုင်ဆာ, အမ် (1998) ။ ကိုကင်း / polydrug-ထိခိုက် dyads: ပထမဦးဆုံးခြောက်လ postnatal လအတွင်းမွေးကင်းစကလေးသိမြင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်မိခင်-မွေးကင်းစအပြန်အလှန်များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ ဂျေ Apple က။ dev ။ Psychol ။ 19, 235-248 ။
Bosch ရဲ့, OJ, ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း, SL, Beiderbeck, ကပစ, ဒေါက်ဂလပ်, AJ နှင့်နျူမန်, ID ကို (2005) ။ စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ link ကို: ဦးနှောက် oxytocin မိခင်ကျူးကျော်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 25, 6807-6815 ။
Bosch ရဲ့, OJ, Musch, ဒဗလျူ, Bredewold, R. , Slattery, DA, နှင့်နျူမန်, ID ကို (2007) ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှု HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသားစဉ်မြေးဆက် lactating အတွက်မိခင်စောင့်ရှောက်မှုချို့ယွင်း: ကိုရွှေ့ဆိုင်စိတ်ဓါတ်များရောဂါအတှကျအဂယက်ရိုက်။ Psychoneuroendocrinology 32, 267-278 ။
Briand, LA ကများနှင့် Blendy ဂျေအေ (2010) ။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲချိတ်ဆက်မော်လီကျူးများနှင့်မျိုးဗီဇအလွှာဟာ။ ဦးနှောက် Res ။ 1314, 219-234 ။
Brummelte, အက်စ်နှင့် Galea, LA က (2010) ။ ကိုယ်ဝန်နှင့်ကိုရွှေ့ဆိုင်နေစဉ်အတွင်းနာတာရှည် corticosterone မိခင်စောင့်ရှောက်မှု, ဆဲလ်ပြန့်ပွားနှင့်ရေကာတာအတွက်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူသက်ရောက်သည်။ Horm ။ ပြုမူနေ။ 58, 769-779 ။
ဘန်း, K. , Chethik, အယ်လ်, ဘန်း, WJ နှင့် Clark က, R. (1991) ။ ကိုကင်း-အလွဲသုံးစားလုပ်မိခင်များနှင့်သူတို့၏မွေးကင်းစအတွက် Dyadic နှောင့်အယှက်။ ဂျေ Clin ။ Psychol ။ 47, 316-319 ။
ဘန်း, ka, Chethik, အယ်လ်, ဘန်း, WJ နှင့် Clark က, R. (1997) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမိခင်များနှင့်သူတို့၏မွေးကင်းစ၏အစောပိုင်းကြားဆက်ဆံရေး: အသက်ရှစ်တဆယ်နှစ်လုံးကိုလမှာအကဲဖြတ်။ ဂျေ Clin ။ Psychol ။ 53, 279-287 ။
Byrne, EM, Bridges, RS, Scanlan, VF, Babb, ဂျာနှင့် Byrne, JJ (2007) ။ ကိုရွှေ့ဆိုင်ကြွက်များတွင် Sensorimotor Gates နဲ့ dopamine function ကို။ Neuropsychopharmacology 32, 1021-1031 ။
Campioni, MR, Xu, အမ်နှင့် McGehee, DS (2009) ။ နျူကလိယအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအချိုမှု Synaptic plasticity accumbens ။ ဂျေ Neurophysiol ။ 101, 3192-3198 ။
ငွေသား, SJ နှင့် Wilkes, DJ သမား (2003) ။ မိခင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ကလေးလျစ်လျူရှုထားတဲ့ဂေဟစနစ်မော်ဒယ်: ကိစ္စများ, ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, နှင့်အကြံပြုချက်များ။ နံနက်။ ဂျေ Orthopsychiatry 73, 392-404 ။
ရှမ်ပိန်, အက်ဖ်အေ, Chretien, P. , Stevenson, CW, Zhang က, ty, Gratton, အေနှင့် Meaney, MJ (2004) ။ နျူကလိယအတွက်အပြောင်းအလဲတွေဟာကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနဲ့ဆက်စပ် dopamine accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 24, 4113-4123 ။
ရှမ်ပိန်, အက်ဖ်အေ, Curley, JP, Swaney, WT, Hasen, NS နှင့် Keverne, eb (2009) ။ အမျိုးသမီးအပြုအမူအပေါ်အဖေဘက်ကသြဇာလွှမ်းမိုးမှု: အတူးဖော်ရေးအတွက် Peg3 ၏အခန်းကဏ္ဍ, olfaction, နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်၏မိခင်အပြုအမူ၏ neuroendocrine စည်းမျဉ်း။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 123, 469-480 ။
ရှမ်ပိန်, အက်ဖ်အေနှင့် Meaney, MJ (2006) ။ ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုကိုရွှေ့ဆိုင်မိခင်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်တစ်ဦးကြွက်မော်ဒယ်အတွက်သားစဉ်မြေးဆက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပွောငျးလဲ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 59, 1227-1235 ။
Chen က BT, Bower, MS, မာတင်, အမ်, Hopf, အက်ဖ်ဒဗလျူ, Guillory, Am, Carelli, RM, Chou, JK နှင့် Bonci, အေ (2008) ။ ကိုကင်းပေမယ့်သဘာဝကဆုလာဘ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမဟုတ်သလို passive ကင်းပြုတ်ရည်ဟာ VTA အတွက်မြဲ LTP ထုတ်လုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ အာရုံခံဆဲလျ 59, 288-297 ။
Chen က Y. , Holzman, C တို့, Chung, အိပ်ချ်, Senagore, P. , Talge, မိုင်နှင့် Siler-Khodr, တီ (2010) ။ မိခင်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်. midpregnancy မှာမိခင်သွေးရည်ကြည် corticotropin-releasing ဟော်မုန်း (CRH) ၏အဆင့်ဆင့်။ Psychoneuroendocrinology 35, 820-832 ။
Ciccocioppo, R. , Sanna, PP, နှင့် Weiss, အက်ဖ် (2001) ။ ကိုကင်း-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လှုံ့ဆော်မှု abstinence မျိုးစုံကိုလအကြာ limbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူနှင့်အာရုံကြော activation induces: D: (1) ရန်သဖြင့်ပယ်ဖျက်ခံရ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 98, 1976-1981 ။
Cleck, ဖြစ်မှု, Ecke, LE နှင့် Blendy ဂျေအေ (2008) ။ ကြွက်တွေမှာကင်း abstinence စဉ်အတွင်းအတင်းအကျပ်ရေကူးစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့အောက်ပါ endocrine နှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်အပြောင်းအလဲများကို။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 201, 15-28 ။
Corominas, အမ်, Roncero, C တို့နှင့် CASA, အမ် (2010) ။ ကိုကင်းစွဲအတွက်အချက်နှင့် neuroplasticity လွှတ် Corticotropin ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 86, 1-9 ။
Dalley, JW, Cardinal က RN နှင့် Robbins, TW (2004) ။ ကြွက်များတွင် Prefrontal အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို: အာရုံကြောနှင့် neurochemical အလွှာဟာ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 28, 771-784 ။
Dalley, JW, Apr, AC, Economidou, ဃ, နှင့် Robbins, TW (2008) ။ Impulse ၏ Neurobehavioral ယန္တရားများ: နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal စနစ်များနှင့် functional neurochemistry ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 90, 250-260 ။
D'အန္န, KL, နှင့် Gammie, SC (2009) ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အတွက် corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor2၏ activation အဆိုးမိခင်ကာကွယ်ရေးထိန်းညှိ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 123, 356-368 ။
der-Avakian, အေ, Bland, ST, Schmid, MJ, Watkins, LR, Spencer, RL နှင့် Maier, SF (2006) ။ နျူကလိယ၏မထိန်းချုပ်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အလားအလာအတွက် glucocorticoids ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ shell ကို dopamine နဲ့ conditional ရာအရပျ preference ကိုတုံ့ပြန်မှု accumbens ။ Psychoneuroendocrinology 31, 653-663 ။
di Chiara, G. အ (2002) ။ နျူကလိယ shell ကိုနှင့်အဓိက dopamine accumbens: အပြုအမူများနှင့်စွဲလမ်းအတွက် differential ကိုအခန်းကဏ္ဍကို။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 137, 75-114 ။
Dinieri, ဂျာ Nemeth, CL, Parsegian, အေ, Carl, တီ, Gurevich, VV, Gurevich, အီး, Neve, RL, Nestler, EJ နှင့် Carlezon, WA ဂျူနီယာ (2009) ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွင်းစခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း function ကို၏သွေးဆောင်နှောင့်အယှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေမှာကြိုးနဲ့ဆန္ဒရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများမှပြောင်းလဲ sensitivity ကို။ ဂျေ neuroscience ။ 29, 1855-1859 ။
Dworkin, SI, Co. , C တို့နှင့် Smith က je (1995) ။ နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာကာလအတွင်းပြောင်းလဲကြွက်ဦးနှောက် neurotransmitter လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နှုန်းထားများ။ ဦးနှောက် Res ။ 682, 116-126 ။
Eiden, RD (2001) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်မိခင်-မွေးကင်းစကလေးနို့တိုက်ကျွေးရေး interaction က Maternal ။ မွေးကင်းစကလေး Ment ။ ကနျြးမာရေးဂျေ 22, 497-511 ။
Eiden, RD, Stevens, အေ, Schuetze, P. နှင့် Dombkowski, LE (2006) ။ polydrug ကင်း-သုံးပြီးမိခင်များအကြားမိခင်အပြုအမူများအတွက်တစ်ဦးကအယူအဆရေးရာမော်ဒယ်: အ postnatal ကိုကင်းသုံးစွဲမှုအခန်းကဏ္ဍနှင့်မိခင်စိတ်ကျရောဂါ။ Psychol ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 20, 1-10 ။
Elliott သည်, JC, Lubin, DA, Walker က, CH နှင့် Johns, JM (2001) ။ acute ကင်းကြွက်ဆည် lactating အတွက် medial preoptic ဧရိယာနှင့် amygdala အတွက် oxytocin အဆင့်ဆင့်ပွောငျးလဲ: မိခင်အပြုအမူနှင့်မိခင်ကျူးကျော်အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neuropeptides 35, 127-134 ။
Erb, အက်စ် (2010) ။ ကိုကင်းရှာ၏ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement စဉ်အတွင်းစိုးရိမ်စိတ်များအကြားဆက်ဆံရေး၏အကဲဖြတ်။ prog ။ Neuropsychopharmacol ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 34, 798-807 ။
Febo, အမ်, ဖေလဇ်မင်း-Ortiz, AC အများနှင့်ဂျွန်ဆင်, TR (2010) ။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု Inactivation သို့မဟုတ်တားစီးအကြီးအကျယ်မိခင်ကြွက်များတွင် pup ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်အုပ်စုဖွဲ့လျော့နည်းစေသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1325, 77-88 ။
Febo, အမ်နှင့်ကူးတို့, CF (2007) ။ ကိုယ်ဝန်မတိုင်မီကင်းအကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသူနာပြုစဉ်အတွင်းခွေးများနှင့် prefrontal cortical လှုပ်ရှားမှု၏နောက်ဆက်တွဲမိခင်ပြန်လည်ရယူခြင်းသက်ရောက်သည်။ neuroscience 148, 400-412 ။
Febo, အမ်, Numan, အမ်နှင့်ကူးတို့, CF (2005) ။ functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် oxytocin နို့စို့နေစဉ်အတွင်းမိခင်-pup ဘွန်းနှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဒေသများမြှင့်လုပ်ဆောင်ပြသထားတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 25, 11637-11644 ။
Febo, အမ်, Segarra, AC, Nair, G. အ, Schmidt က, K. , Duong, TQ နှင့်ကူးတို့, CF (2004) ။ နိုးကြွက်များတွင်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI အားဖြင့်ထင်ရှားထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိတွေ့မှုများ၏အာရုံကြောအကျိုးဆက်များ။ Neuropsychopharmacology 30, 936-943 ။
Feldman, R. , Weller, အေ, Zagoory-ရှာရုန်, O. နှင့် Levine, အေ (2007) ။ လူ့ဆက်နွယ်မှုတစ် neuroendocrinological ဖောင်ဒေးရှင်းအဘို့သက်သေအထောက်အထား: ကိုယ်ဝန်ကိုဖြတ်ပြီးသွေးရည်ကြည် oxytocin အဆင့်ဆင့်နှင့်ကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလမိခင်-မွေးကင်းစကလေး Bond ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ 18, 965-970 ။
Felton, TM, Linton, အယ်လ်, Rosenblatt, JS နှင့် Morrell, JI (1998) ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenular နျူကလိယ၏နဂိုအတိုင်းအာရုံခံထိခိုက်ကညာအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူများ၏ nonhormonal, pup-mediated display ကိုများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 112, 1458-1465 ။
ဖာဂူဆန်, ဖြစ်မှု, Aldag, JM, Insel, TR နှင့်လူငယ်တို့, LJ (2001) ။ အဆိုပါ medial amygdala အတွက် oxytocin မောက်အတွက်လူမှုရေးအသိအမှတ်ပြုမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 21, 8278-8285 ။
ဖာဂူဆန်, ဖြစ်မှု, လူငယ်, LJ, Hearn, EF, Matzuk, MM, Insel, TR နှင့် Winslow, JT (2000) ။ အဆိုပါ oxytocin ဗီဇချို့တဲ့ကြွက်များတွင်လူမှုရေးသတိမေ့ခြင်း။ နတ်။ မျိုးရိုးဗီဇ။ 25, 284-288 ။
ကူးတို့, CF, Kulkarni, P. , Sullivan က, JM ဂျူနီယာပိုခက်, ဂျာ Messenger ကို, TL နှင့် Febo, အမ် (2005) ။ Pup နို့စို့ကိုကင်းထက်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းဖြစ်ပါသည်: အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကနေသက်သေအထောက်အထားများနှင့်သုံးရှုထောင်ကွန်ပျူတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဂျေ neuroscience ။ 25, 149-156 ။
Fleming က, AS နှင့် Korsmit, အမ် (1996) ။ အဆိုပါမိခင်ဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင် plasticity: အကိုရွှေ့ဆိုင်ကြွက်များတွင် hypothalamic အတွက် Fos-Lir အပေါ်မိခင်အတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ, limbic နှင့် cortical အဆောက်အဦများ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 110, 567-582 ။
Fleming က, AS, Suh, EJ, Korsmit, အမ်နှင့် Rusak, ခ (1994a) ။ ကြွက်များတွင်မိခင်နှင့်လူမှုရေးအပြန်အလှန်အားဖြင့် medial preoptic ဧရိယာနှင့် limbic အဆောက်အဦများအတွက် Fos ကဲ့သို့ immunoreactivity ၏ activation ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 108, 724-734 ။
Fleming က, AS နှင့် Walsh, C. (1994b) ။ ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူ၏ Neuropsychology: မိခင်-အမှိုက်သရိုက်များ interaction ကနေစဉ်အတွင်းက c-fos စကားရပ်။ Psychoneuroendocrinology 19, 429-443 ။
Franklin, TR နှင့် Druhan, JP (2000) ။ တစ်ဦးကိုကင်း-တွဲပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်နျူကလိယ accumbens နှင့်ဆက်စပ်နေသောဒေသများရှိ Fos-related antigen ၏ expression ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 12, 2097-2106 ။
Freeman က, WM, Brebner, K. , Lynch, WJ, Robertson က DJ သမား, ရောဘတ်, DC ကများနှင့် Vrana, Ke (2001) ။ ကြွက် hippocampus အတွက်ကင်း-တုံ့ပြန်မှုမျိုးဗီဇစကားရပ်အပြောင်းအလဲများကို။ neuroscience 108, 371-380 ။
Freeman က, WM, နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်, ME, Patel က, KM, Brucklacher, RM, မော်ဂန်, ဃ, ရောဘတ်, DC ကများနှင့် Vrana, Ke (2010) ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေ abstinence အောက်ပါ medial prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်အပြောင်းအလဲများကို။ BMC neuroscience ။ 11, 29. doi: 10.1186/1471-2202-11-29
Gammie, SC, Bethea, ED နှင့် Stevenson, SA (2007) ။ corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor 1 လစ်လပ်ကြွက်များတွင်ပြောင်းလဲမိခင် profile များကို။ BMC neuroscience ။ 8, 17. doi: 10.1186/1471-2202-8-17
Gammie, SC, Edelmann, MN, ကထပ်လောင်း-Brehm, C တို့, D'အန္န, KL, လွန်, AP နှင့် Stevenson, SA (2008a) ။ ပြောင်းလဲ dopamine သဘာဝကျကျမိခင်လျစ်လျူရှုဖြစ်ပေါ်အတွက်အချက်ပြ။ PLoS ONE 3, e1974 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0001974
Gammie, SC, Seasholtz, AF နှင့် Stevenson, SA (2008b) ။ corticotropin-releasing အချက် binding ပရိုတိန်း၏ပယ်ဖျက်ခြင်းရွေးချယ်မိခင်ချို့ယွင်းပေမယ့်ကျူးကျော် intermale မဟုတ်ပါဘူး။ neuroscience 157, 502-512 ။
Geisler, အက်စ်နှင့် Trimble, အမ် (2008) ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula: မရှိတော့လျစ်လျူရှု။ CNS Spectr ။ 13, 484-489 ။
Goeders, NE (2002) ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ကိုကင်းစွဲ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 301, 785-789 ။
Gottwald, SR နှင့် Thurman, SK ကို (1994) ။ မွေးကင်းစကာလ၌မိခင်-မွေးကင်းစအပြန်အလှန်နှင့်မွေးကင်းစကလေး arousal အပေါ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိုကင်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ခေါင်းစဉ်များအစောပိုင်းကလေး။ spec ။ Education ။ 14, 217-231 ။
Gulpinar MA, နှင့် Yegen, ဘီစီ (2004) ။ သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ဇီဝကမ္မဗေဒ: peptides နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍ။ Curr ။ ပရိုတိန်း Pept ။ သိပ္ပံ။ 5, 457-473 ။
Haber, SN နှင့် Knutson, ခ (2009) ။ အကျိုးကိုဆားကစ်: မျောက်ခန္ဓာဗေဒနှင့်လူ့ပုံရိပ်ချိတ်ဆက်။ Neuropsychopharmacology 35, 4-26 ။
တူ, RP ဂျူနီယာနှင့် Cook က ES (1994) ။ နောက်ဆက်တွဲကင်းစိန်ခေါ်မှုကြွက်ဦးနှောက်၏ extrapyramidal ဒေသများမြှင့်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုတဖြည်းဖြည်းသည်းခံစိတ်, နာတာရှည်ကင်းကုသမှုအားဖြင့် mesolimbic ဒေသများတွင်ထုတ်လုပ်နေသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 14, 4289-4298 ။
Hatton, GI နှင့်ဝမ်, YF (2008) ။ နို့ကိုထွတ်ပေါကျကှဲနှင့်တုံ့ပြန်မှုအခြေခံအာရုံကြောယန္တရားများ။ prog ။ ဦးနှောက် Res ။ 170, 155-166 ။
Heiming, RS, နှင့် Sachser, N. (2010) ။ အမူအကျင့်ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင် serotonin Transporter genotype နှင့်အစောပိုင်းဒုက္ခအကျိုးဆက်များ - ရောဂါဗေဒသို့မဟုတ်လိုက်လျောညီထွေ? တပ်ဦး။ neuroscience ။ 4: 187 ။ Doi: 10.3389 / fnins.2010.00187
Herman, JP, Ostrander, MM, Mueller, NK နှင့် Figueiredo, အိပ်ချ် (2005) ။ စိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်း၏ Limbic system ကိုယန္တရားများ: hypothalamo-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုး။ prog ။ Neuropsychopharmacol ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 29, 1201-1213 ။
ဟာနန်ဒက်ဇ်-Gonzalez, အမ်, Prieto-Beracoechea, C တို့, Navarro-Meza, အမ်, Ramos-ဂွေဗားရား, JP, Reyes-Cortes, R. နှင့်ဂွေဗားရား, MA (2005) ။ ကညာနှင့်နို့တိုက်ကြွက်များတွင် olfactory ဆွစဉ်အတွင်း Prefrontal နှင့် tegmental လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 83, 749-758 ။
Insel, TR (2003) ။ လူမှုရေးပူးတွဲမှုတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း Physiol ။ ပြုမူနေ။ 79, 351-357 ။
Jarrett, TM, McMurray, MS, Walker က, CH နှင့် Johns, JM (2006) ။ ကိုကင်းကုသမှုကိုရွှေ့ဆိုင်ကြွက်ဆည်အတွက် mRNA ထုတ်လုပ်မှု binding သော်လည်းမ oxytocin အဲဒီ receptor ပွောငျးလဲ။ Neuropeptides 40, 161-167 ။
Jin က, SH, Blendy, ဂျာနှင့်သောမတ်စ်, SA (2005) ။ သိသိ amp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်းသာမန်မိခင်ပွားအပြုအမူများအတွက်လိုအပ်သည်။ neuroscience 133, 647-655 ။
Johns, JM, Elliott သည်, DL, Hofler, မ, Joyner, PW, McMurray, MS, Jarrett, TM, Haslup, Am, Middleton, CL, Elliott သည်, JC နှင့် Walker က, CH (2005) ။ ကိုကင်းကုသမှုနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကြွက်များတွင်မျိုးဆက်မိခင်အပြုအမူနှောင့်အယှက်မှအပြန်အလှန်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 119, 1605-1618 ။
Johns, JM, Lubin, DA, Walker က, CH, Joyner, P. , Middleton, C တို့, Hofler, V. နှင့် McMurray, အမ် (2004) ။ ကိုကင်းနှင့်အ fluoxetine နှင့်အတူကိုယ်ဝန်ကုသမှုနို့တိုက်ကြွက်ဆည်အတွက် oxytocin အဲဒီ receptor နံပါတ်နှင့် binding ဆှဖှေဲ့ပွောငျးလဲ။ int ။ ဂျေ Dev မှ။ neuroscience ။ 22, 321-328 ။
Johns, JM, Lubin, DA, Walker က, CH, မီတာ, Ke နှင့် Mason ဆို, ဂျော်ဂျီယာ (1997a) ။ နာတာရှည်ကိုယ်ဝန်ကိုကင်းကုသ medial preoptic ဧရိယာ, Sprague-Dawley ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာနှင့် hippocampus အတွက် oxytocin အဆင့်ဆင့်လျော့နည်းစေပါသည်။ Neuropeptides 31, 439-443 ။
Johns, JM, လမ်းပြ Noonan, LR, Zimmerman, LI လီ, အယ်လ်, နှင့် Pedersen,, CA (1997b) ။ Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူများနှင့်ကျူးကျော်အပေါ်ကိုယ်ဝန်ကိုကင်းကုသမှုအနေဖြင့်ရေတိုနှင့် long- သက်တမ်းဆုတ်ခွာ၏ဆိုးကျိုးများ။ dev ။ neuroscience ။ 19, 368-374 ။
Johns, JM, လမ်းပြ Noonan, LR, Zimmerman, LI လီ, အယ်လ်, နှင့် Pedersen,, CA (1994) ။ Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူများနှင့်ရန်လိုစတင်ခြင်းအပေါ်နာတာရှည်နှင့်စူးရှကင်းကုသမှုဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 108, 107-112 ။
ဂျွန်ဆင်, AL, နက်ဖြန်, အီး, Accornero, VH, Xue, အယ်လ်, အန်သိုနီ, JC နှင့် Bandstra, ES (2002) ။ ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း Maternal: အမူကြိုကာလ၌မိခင်ကလေးကစား interaction ကအပေါ်ခန့်မှန်းဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ Dev မှ။ ပြုမူနေ။ ကလေးအထူးကု။ 23, 191-202 ။
Kash, TL, Nobis, WP, Matthews, RT ကိုနှင့် Winder, DG (2008) ။ Dopamine ဟာ CRF-R1-မှီခိုမှုလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်တိုးချဲ့ amygdala အတွက်အစာရှောင်ခြင်း excitatory Synaptic ဂီယာပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 13856-13865 ။
ကယ်လီ, SJ (1998) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာ-အလွဲသုံးစားလုပ်မိခင်များ၏အပြုအမူစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ဖြေရှင်း။ ဂျေ Soc ။ ကလေးအထူးကု။ သူနာပြု။ 3, 103-110 ။
Kimble, DP, ရော်ဂျာ, အယ်လ်, နှင့် Hendrickson, CW (1967) ။ Hippocampal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အဆိုပါ albino ကြွက်များတွင်မိခင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်အပြုအမူနှောင့်အယှက်။ ဂျေ comp ။ Physiol ။ Psychol ။ 63, 401-407 ။
Kinnally, EL, Tarara, ER, Mason ဆို, WA, Mendoza, SP, အာဗေလ, K. , လီယွန်, LA ကများနှင့် Capitanio, JP (2009) ။ serotonin Transporter စကားရပ်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုများကခန့်မှန်းသည်နှင့်မွေးကင်းစကလေးစမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များအတွက် disinhibited အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 9, 45-52 ။
Knutson, ခနှင့် Cooper က, JC (2005) ။ ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း၏ functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ Curr ။ Opin ။ Neurol ။ 18, 411-417 ။
Kreibich, AS နှင့် Blendy ဂျေအေ (2004) ။ စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်းစိတ်ဖိစီးမှုသော်လည်းမကင်း-သွေးဆောင် reinstatement ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 24, 6686-6692 ။
Kreibich, AS, Briand, အယ်လ်, Cleck, ဖြစ်မှု, Ecke, အယ်လ်, ဆန်, KC နှင့် Blendy ဂျေအေ (2009) ။ ကိုကင်းဆုလာဘ်၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အလားအလာ: CRF R1 နှင့် CREB များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropsychopharmacology 34, 2609-2617 ။
Kringelbach, ML, Lehtonen, အေ, Squire, အက်စ်, Harvey, AG က, Craske, MG, Holliday, IE ကို, အစိမ်းရောင်, AL, Aziz က, tz, Hansen PC, Cornelissen, PL နှင့် Stein, အေ (2008) ။ တစ်ဦးကတိကျတဲ့နှင့်မိဘ၏ဗီဇအဘို့အလျင်မြန်သောအာရုံကြောလက်မှတ်။ PLoS ONE 3, e1664 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0001664
Kuczkowski, K. (2004) ။ parturient အလွဲသုံးစားလုပ်အဆိုပါကင်း: ထုံဆေးထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်။ နိုင်သလား။ ဂျေ Anesth ။ 51, 145-154 ။
Lau, C တို့နှင့် Simpson, C. (2004) ။ ကြွက်များတွင်နို့အပေါ်အချိန်ကြာမြင့်စွာစိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများလေ့လာမှုအဘို့အတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 82, 193-197 ။
သည် Le Moal, အမ် (2009) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု: စွဲမှအားနည်းချက်နှင့်အကူးအပြောင်း။ Pharmacopsychiatry 42, S42-S55 ။
(2000) AS Lee က, အေ, Clancy, အက်စ်နှင့် Fleming က။ မိခင်ကြွက် Bar-စာနယ်ဇင်းခွေးများများအတွက်: pup- အားဖြည့်များအတွက်တုံ့ပြန်မိခင်အပြုအမူနှင့်အော်ပရေတာပေါ် mpoa ၏တွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများနှင့် limbic ဆိုဒ်များ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 108, 215-231 ။ မူလကပုံနှိပ် [တညျ့နှင့်ချိဆောင်းပါး ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res။ 1999; 100, 15-31] ။
Lee က HJ, Macbeth, AH, Pagani, JH နှင့်လူငယ်တို့, WS III ကို။ (2009) ။ oxytocin: အသက်တာ၏အကြီးစည်းရုံးရေးမှူး။ prog ။ Neurobiol ။ 88, 127-151 ။
လီ, အမ်နှင့် Fleming က, AS (2003) ။ အဆိုပါနျူကလိယ shell ကိုရွှေ့ဆိုင်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် pup-ပြန်လည်ရယူခြင်း၏ပုံမှန်စကားရပ်ဘို့အရေးကြီးသည် accumbens ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 145, 99-111 ။
လီ, MY, ယန်, QS, Coffey, ll နှင့် Reith, ME (1996) ။ Extracellular dopamine, norepinephrine နှင့်လွတ်လပ်စွာကင်းနှင့်အခြား monoamine လွှာမှ blockers နှင့်အတူ intracerebral Dialysis စဉ်အတွင်းကြွက်ရွေ့လျား၏နျူကလိယ accumbens အတွက် serotonin ။ ဂျေ Neurochem ။ 66, 559-568 ။
အလင်း, KC, Grewen, KM, Amico, ဂျာ Boccia, အမ်, Brownley, ka နှင့် Johns, JM (2004) ။ ပလာစမာ oxytocin တုံ့ပြန်မှုအတွက်လိုငွေပြမှုနှင့်တိုးမြှင့်အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကိုကင်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူမိခင်များအတွက်သွေးပေါင်ချိန်။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 29, 1541-1564 ။
Lightman, SL, Windle, RJ, Wood က, SA, Kershaw, YM, Shanks, N. နှင့် Ingram, CD ကို (2001) ။ အဆိုပါ hypothalamo-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးအတွင်း Peripartum plasticity ။ prog ။ ဦးနှောက် Res ။ 133, 111-129 ။
Lodge, DJ သမားနှင့်တော်ကကျေးဇူး, AA ကို (2005) ။ dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဆက်စပ်: acute နှင့်နာတာရှည် corticotropin-releasing အချက် 1 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုကင်း-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 314, 201-206 ။
Lonstein, JS, Simmons, DA နှင့် Stern ပာ, JM (1998) ။ နို့တိုက်ကြွက်များအတွင်း caudal periaqueductal မီးခိုးရောင်၏ functions: kyphosis, lordosis, မိခင်ကျူးကျော်ခြင်း, စိုးရိမ်နေကြသည်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 112, 1502-1518 ။
Lonstein, JS နှင့် Stern ပာ, JM (1997) ။ နို့တိုက်ကြွက်များအတွင်းက c-fos နှင့်လျှပ်တွေ့ရှိရပါသည်လေ့လာမှုများ: မိခင်ပွားခြင်းနှင့်ကျူးကျော်အတွက် midbrain periaqueductal မီးခိုးရောင်၏အခန်းက္ပ။ ဂျေ neuroscience ။ 17, 3364-3378 ။
Lorberbaum, JP, Newman က, JD, Dubno, JR, Horwitz, AR, Nahas, Z. , Teneback, CC ကို, Bloomer, CW, Bohning, DE, ဗင်းဆင့်, ဃ, ဂျွန်ဆင်, MR, Emmanuel, N. , Brawman-Mintzer , O. , စာအုပ်, SW, Lydiard, RB, Ballenger, JC နှင့်ဂျော့ခ်ျ, က MS (1999) ။ မွေးကင်းစကလေးအော်ဟစ်တုံ့ပြန်မိခင်များလေ့လာဖို့ fMRI အသုံးပြုခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။ စိတ်ကျရောဂါ။ စိုးရိမ်ခြင်း 10, 99-104 ။
Lorberbaum, JP, Newman က, JD, Horwitz, AR, Dubno, JR, Lydiard, RB, Hamner, ကို MB, Bohning, DE, နှင့်ဂျော့ခ်ျ, က MS (2002) ။ လူ့မိခင်အပြုအမူအတွက် thalamocingulate circuitry များအတွက်အလားအလာအခန်းကဏ္ဍ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 51, 431-445 ။
Lovic, V. , Palombo, DJ သမားနှင့် Fleming က, AS (2010) ။ Impulse ကြွက်များလျော့နည်းမိခင်ဖြစ်ကြသည်။ dev ။ Psychobiol ။ 53, 13-22 ။
Lubin, DA, Cannon, JB, အနက်ရောင်, MC, ဘရောင်း, LE နှင့် Johns, JM (2003) ။ နို့တိုက်ကြွက်ရေကာတာ၏ discrete ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ monoamine အဆင့်ဆင့်အပေါ်နာတာရှည်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုများ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 74, 449-454 ။
Lubin, DA, မီတာ, Ke, Walker က, CH နှင့် Johns, JM (2001) ။ ကညာကြွက်များတွင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူအပေါ်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးဆိုးကျိုးများ။ prog ။ Neuropsychopharmacol ။ Biol ။ Psychol ။ 25, 1421-1433 ။
Mattson, BJ နှင့် Morrell, JI (2005) ။ pup-ဆက်စပ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ် cocaine- များအတွက် preference differential Fos သို့မဟုတ်နို့တိုက်အတွက် cocaine- နှင့်စိတ်ကြွဆေး-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှတ်တမ်း, မိခင်ကြွက်ဖြစ်စေဖော်ပြအာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်။ neuroscience 135, 315-328 ။
Mayes, LC, Feldman, R. , Granger, RH အ, ဟေး, OM, Bornstein, MH နှင့် Schottenfeld, R. (1997) ။ polydrug ၏သက်ရောက်မှု3နှင့်6လအတွင်းမှာမိခင်-မွေးကင်းစအပြန်အလှန်အပေါ်ကိုကင်းနှင့်မရှိဘဲအသုံးပြုပါ။ မွေးကင်းစကလေးပြုမူနေ။ dev ။ 20, 489-502 ။
လူယာ, SM, နယူးယောက်, MK နှင့်ဂူ, PR စနစ် (2004) ။ လူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့များ၏အာရုံကြောအလွှာ: fMRI ၏ခေတ်သစ်အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် 10, 260-268 ။
McEwen, BS နှင့် Gianaros, PJ (2011) ။ Stress- နှင့် allostasis-သွေးဆောင်ဦးနှောက် plasticity ။ Annu ။ ဗျာ Med ။ 62, 431-445 ။
McMurray, MS, Joyner, PW, Middleton, CW, Jarrett, TM, Elliott သည်, DL, Black က MA, Hofler, မ, Walker က, CH နှင့် Johns, JM (2008) ။ ကြွက်ဆည်အတွက်မိခင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက် oxytocin အပေါ်ကိုကင်း၏မျိုးဆက်ဆိုးကျိုးများ။ စိတ်ဖိစီးမှု 11, 398-410 ။
Meshul, CK, Noguchi, K. , Emre, N. နှင့်အီလီဆန်, G. အ (1998) ။ ကြွက် habenula နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွင်းအချိုမှုများနှင့်ဂါဘမြို့သား immunolabeling အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို။ synapses 30, 211-220 ။
Molitor, အေနှင့် Mayes, LC (2010) ။ ထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကနှင့်၎င်းတို့၏ polydrug-ကင်း-သုံးပြီးမိခင်များအကြားပြဿနာ dyadic အပြန်အလှန်။ မွေးကင်းစကလေး Ment ။ ကနျြးမာရေးဂျေ 31, 121-140 ။
နယ်လ်ဆင်, CJ, မီတာ, Ke, Walker က, CH, အေရာစ်, AA ကိုနှင့် Johns, JM (1998) ။ ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူအပေါ်နာတာရှည်ကင်း၏တစ်ဦးကထိုး-တုံ့ပြန်မှုလေ့လာမှု။ Neurotoxicol ။ Teratol ။ 20, 657-660 ။
တူ, ဘီစီနှင့် Febo, အမ် (2010) ။ ကြွက်များတွင်မိခင်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကျူးကျော်အပေါ်ကြိုတင်ကိုယ်ဝန်မှကိုကင်းအကဲဆတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 209, 127-135 ။
Nitschke, JB, နယ်လ်ဆင်, EE, Rusch, bd, Fox က, AS, Oakes, TR နှင့် Davidson, RJ (2004) ။ Orbitofrontal cortex ဟာသူတို့ရဲ့မွေးကင်းစမွေးကင်းစ၏ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုမိခင်များအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်ခြေရာခံ။ Neuroimage 21, 583-592 ။
Noriuchi, အမ်, Kikuchi, Y. နှင့် Senoo, အေ (2008) ။ မိခင်မေတ္တာအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroanatomy: မွေးကင်းစကလေးရဲ့ပူးတွဲဖိုင်ကိုအပြုအမူတွေမှမိခင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 63, 415-423 ။
Numan, အမ် (2007) ။ စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များနှင့်ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူများ၏အာရုံကြော circuitry ။ dev ။ Psychobiol ။ 49, 12-21 ။
Numan, အမ်, Stolzenberg, DS, Dellevigne, AA ကို, Correnti, CM နှင့် Numan, MJ (2009) ။ muscimol သို့မဟုတ် baclofen ဖြစ်စေနှင့်အတူ ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron ၏ယာယီ inactivation reversibly ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံယန္တရားများမှတဆင့်ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူ disrupts ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 123, 740-751 ။
Olazabal, DE, Abercrombie, အီး, Rosenblatt, JS နှင့် Morrell, JI (2004) ။ dopamine, serotonin, နှင့်လူငယ်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူ mediates သောအာရုံကြောဆားကစ်မှာသူတို့ရဲ့ metabolites များ၏ content ။ ဦးနှောက် Res ။ နွားလား။ 63, 259-268 ။
Oleson, eb, Talluri, အက်စ်, Childers, SR, Smith က je, ရောဘတ်, DC က, ဘိုနင်, KD နှင့် Budygin, EA ၏ (2009) ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ် Dopamine လွှာမှအပြောင်းအလဲများကို။ Neuropsychopharmacology 34, 1174-1184 ။
Pajulo, အမ်, Suchman, N. , Kalland, အမ်နှင့် Mayes, အယ်လ် (2006) ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းအမျိုးသမီးတွေအလွဲသုံးစားလုပ်ပစ္စည်းဥစ္စာဘို့အလူနေအိမ်ကုသမှု၏ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ခြင်း: မိခင်ရောင်ပြန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်မိခင်ကလေးကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ မွေးကင်းစကလေး Ment ။ ကနျြးမာရေးဂျေ 27, 448 ။
Palkovits, အမ်, လူငယ်, WS III ကို, Kovacs, K. , Toth, Z. နှင့် Makara, GB ကို (1998) ။ ရေရှည် paraventricular ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့် adrenalectomy အောက်ပါဗဟို amygdaloid အာရုံခံ၏ corticotropin-releasing ဟော်မုန်းမျိုးဗီဇစကားရပ်ထဲမှာ ALTER ။ neuroscience 85, 135-147 ။
Panatier, အေနှင့် Oliet, SH (2006) ။ အဆိုပါ hypothalamus အတွက်အာရုံခံဆဲလျ-glia interaction က။ အာရုံခံဆဲလျ Glia Biol ။ 2, 51-58 ။
Pawluski, JL နှင့် Galea, LA က (2007) ။ မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုဆည်အတွင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်း hippocampal neurogenesis ပွောငျးလဲ။ neuroscience 149, 53-67 ။
Paxinos, G. အများနှင့် Watson, C. (1997) ။ အတွက် "ကြွက်ဦးနှောက်" Stereotaxic Coordinates ။ San Diego မှ: ပညာရေးဆိုင်ရာနှိပ်ပါ။
Pedersen,, CA များနှင့် Boccia, ML (2002) ။ oxytocin ကိုပေးသနားတော်မူ၏နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု mothering, မိခင်လက်ခံရရှိချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု 5, 259-267 ။
Pedersen,, CA, ဝဲလ်, JD, Walker က, C တို့, အေရာစ်, G. အများနှင့် Mason ဆို, ဂျော်ဂျီယာ (1994) ။ oxytocin အဆိုပါ ventral tegmental အတွက်ကြွက်မိခင်အပြုအမူများကိုရွှေ့ဆိုင်စတင်ခြင်းမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် preoptic ဒေသများ medial ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 108, 1163-1171 ။
Pego, JM, Morgado, P. , Pinto, LG Cerqueira, JJ, Almeida, OF နှင့် Sousa, N. (2008) ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်၏ morphological ဆက်စပ်မှု၏ Dissociation ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 1503-1516 ။
Peterson, SL, Olsta, SA နှင့် Matthews, RT ကို (1990) ။ ကိုကင်း ventral tegmental ဧရိယာ activation မှ medial prefrontal cortex အာရုံခံဆဲလျတုံ့ပြန်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက် Res ။ နွားလား။ 24, 267-273 ။
Quinones-Jenab, V. , Krey, LC, Schlussman, SD, Ho သည်, အေနှင့် Kreek, MJ (2000) ။ နာတာရှည် '' မူးရူး '' ပုံစံကိုကင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြွက်များ၏ neuroendocrine ပရိုဖိုင်းကိုပွောငျးလဲ။ neuroscience ။ လက်တ။ 282, 120-122 ။
Rasia-Filho, AA ကို, Londero, RG နှင့် Achaval, အမ် (2000) ။ အဆိုပါ amygdala ၏ functional လှုပ်ရှားမှုများ: ခြုံငုံသုံးသပ်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု neuroscience ။ 25, 14-23 ။
Rees, SL, Panesar, အက်စ်, Steiner, အမ်နှင့် Fleming က, AS (2004) ။ ယင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူအပေါ် adrenalectomy နှင့် corticosterone အစားထိုး၏ဆိုးကျိုးများ။ Horm ။ ပြုမူနေ။ 46, 411-419 ။
Rodaros, ဃ, Caruana, DA, Amir, အက်စ်နှင့် Stewart က, ဂျေ (2007) ။ limbic forebrain နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၏ဒေသတွင်းဖို့ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယကနေ Corticotropin-releasing အချက်စီမံကိန်းများ။ neuroscience 150, 8-13 ။
Russo, SJ, Festa, ED, Fabian, SJ, Gazi, FM ရေ, Kraish, အမ်, Jenab, အက်စ်နှင့်Quiñones-Jenab, V. (2003) ။ Gonadal ဟော်မုန်း differential ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို modulate ။ neuroscience 120, 523-533 ။
Seip, KM နှင့် Morrell, JI (2007) ။ ကိုကင်းများ၏မက်လုံးပေး salience တိုးပွားလာအစောပိုင်းကိုရွှေ့ဆိုင်နေစဉ်အတွင်းကင်း-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုကျော် pup- များအတွက် preference ကိုစိန်ခေါ်: ရာအရပျ preference ကိုနှင့် locomotor အဆိုပါ lactating အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လေ့လာဆန်းစစ်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 194, 309-319 ။
Seip, KM နှင့် Morrell, JI (2009) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၏ယာယီ inactivation ရွေးချယ် pup- သော်လည်းမကင်း-တွဲအခင်းအကျင်းအဘို့အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကို၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး disrupts ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 123, 1325-1338 ။
Seip, KM, Pereira, အမ်, Wansaw, အမတ်, Reiss, JI, Dziopa, EI နှင့် Morrell, JI (2008) ။ အမျိုးသမီးကြွက်များ၏ရွှေ့ဆိုင်ကာလတစ်လျှောက်ကိုကင်းများမက်လုံးပေး salience ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 199, 119-130 ။
Shahrokh, DK, Zhang က, ty, Diorio, ဂျေ, Gratton, အေနှင့် Meaney, MJ (2010) ။ oxytocin-dopamine interaction ကကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူအတွက်မူကွဲဖျန်ဖြေ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 151, 2276-2286 ။
Sinha, R. (2001) ။ ဘယ်လိုစိတ်ဖိစီးမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် relapse ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ပါသလဲ? Psychopharmacologia 158, 343-359 ။
Sinha, R. , Lacadie, C တို့, Skudlarski, P. , Fulbright, R. , Rounsaville, ခ, Kosten, တီနှင့် Wexler, BE (2005) ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာနဲ့ဆက်စပ်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 183, 171-180 ။
Sinha, R. , Lacadie, C တို့, Skudlarski, P. နှင့် Wexler, BE (2004) ။ လူသားတွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲအခြေခံအာရုံကြောဆားကစ်။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1032, 254-257 ။
Sinha, R. နှင့်လီ, CSR (2007) ။ imaging stress- နှင့် cue-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်တဏှာ: relapse နှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့။ မူးယစ်ဆေးအရက်ဗျာ 26, 25-31 ။
Slattery, DA, နှင့်နျူမန်, ID ကို (2008) ။ အဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှုကျေးဇူးပြုပြီး! အဆိုပါမိခင်ကဦးနှောက်၏စိတ်ဖိစီးမှု hyporesponsiveness ၏ mechanisms ။ ဂျေ Physiol ။ 586, 377-385 ။
Smith က JW, Seckl, JR, အီဗန်, AT, Costall, ခနှင့်စမိုက်, JW (2004) ။ ကိုယ်ဝန်စိတ်ဖိစီးမှု Post-partum စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူ induces နှင့်ကြွက်များတွင်မိခင်စောင့်ရှောက်မှုပွောငျးလဲ။ Psychoneuroendocrinology 29, 227-244 ။
လေးလံနေတာတွေ့နေရ, LA က, Beyene, အမ်, Carelli, RM, နှင့် Wightman, RM (2009) ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် dopamine ၏ Synaptic လျတ်အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာအာရုံခံလှုပ်ရှားမှုကနေပေါ်ပေါက်။ ဂျေ neuroscience ။ 29, 1735-1742 ။
stack, EC, Balakrishnan, R. , Numan, MJ နှင့် Numan, အမ် (2002) ။ မိခင်အပြုအမူထိန်းညှိအာရုံကြောဆားကစ်အတွက် medial preoptic ဧရိယာ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroanatomical စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 131, 17-36 ။
Steffensen, SC, တေလာ, SR, Horton က, ML, ဘာဘာ, မာခ်, ရှိထား, LT, Stobbs, SH နှင့် Allison, DW (2008) ။ ကိုကင်းဂါဘမြို့သားအာရုံခံဆဲလျဗို့-အထိခိုက်မခံဆိုဒီယမ် channel များကိုအသုံးပြုခြင်း-မှီခိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းမှတဆင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံ disinhibits ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 2028-2040 ။
Strathearn, အယ်လ်, Fonagy, P. , Amico, ဂျေများနှင့်ဂူ, PR စနစ် (2009) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကို attachment မွေးကင်းစကလေးတွေကိုမှမိခင်ဦးနှောက်နှင့် oxytocin တုံ့ပြန်မှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Neuropsychopharmacology 34, 2655-2666 ။
Strathearn, အယ်လ်, နှင့် Kosten, TR (2008) ။ နာတာရှည်ကင်းအသုံးပြုမှုကလေးမျက်နှာတွေကိုမှမိခင်တစ်ဦးရဲ့ဦးနှောက်ကိုတုန့်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်စေသလား တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူး fMRI လေ့လာမှု။ မူးယစ်ဆေးမူတည် 70th နှစ်ပတ်လည်သိပ္ပံအစည်းအဝေး၏ပြဿနာများအပေါ်ကောလိပ်.
ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲ။ (2008) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ် 2007 အမျိုးသားစစ်တမ်းကနေရလာဒ်: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွေ့ရှိချက် (အသုံးချလေ့လာရေးရုံး, NSDUH စီးရီးကို H-34, DHHS ထုတ်ဝေမှုအမှတ် SMA 08-4343) ။ Rockville, MD ။
Suchman, N. , Decoste, C တို့, Castiglioni, N. , Legow, N. နှင့် Mayes, အယ်လ် (2008) ။ မိခင်နှင့်ကလေးငယ်များနဲ့ PROGRAM: ပစ္စည်းဥစ္စာ-အလွဲသုံးစားလုပ်မိခင်များတစ်ခုပူးတွဲဖိုင်ကို-based မိဘအုပ်ထိန်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကနေပဏာမတွေ့ရှိချက်။ Psychoanal ။ Psychol ။ 25 ။
Suchman, NE နှငျ့ Luthar, အက်စ်အက်စ် (2001) ။ methadone-ထိန်းသိမ်းထားမိခင်များ '' မိဘအုပ်ထိန်းအတွက်မိဘအုပ်ထိန်းစိတ်ဖိစီးမှု၏ဖြန်ဖြေအခန်းကဏ္ဍ။ မိဘသိပ္ပံ။ Pract ။ 1, 285-315 ။
Takayanagi, Y. , Yoshida, အမ်, Bielsky, IF, Ross ကသူ, Kawamata, အမ်, Onaka, တီ, Yanagisawa, တီ, Kimura, တီ, Matzuk, MM, လူငယ်, LJ နှင့် Nishimori K ကို ။ (2005) ။ oxytocin အဲဒီ receptor-လစ်လပ်ကြွက်တွေမှာပြံ့နှံ့လူမှုရေးလိုငွေပြမှု, ဒါပေမယ့်ပုံမှန် parturition ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 102, 16096-16101 ။
သောမတ်စ်, MJ နှင့် Malenka, RC (2003) ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ် Synaptic plasticity ။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ B က Biol ။ သိပ္ပံ။ 358, 815-819 ။
Thompson က, AC အများနှင့် Kristal, ကို MB (1996) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ Opioid ဆွကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူစတင်ခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ဦးနှောက် Res ။ 743, 184-201 ။
Tronick, EZ, Messinger, DS, Weinberg, MK, မျ့ဘဲလျ, BM, LaGasse, အယ်လ်, Seifer, R. , Bauer က CR, Shankaran, အက်စ်, Bada, အိပ်ချ်, Wright, ll, ရေကူးကန်, K. နှင့် လျူ, ဂျေ (2005) ။ ကိုကင်းထိတွေ့မွေးကင်းစ၏သိမ်မွေ့လိုက်လျော 'နှင့်မိခင်များ' 'လူမှုရေး-စိတ်ခံစားမှုအပြုအမူနှင့်မျက်နှာ-to-မျက်နှာနေဆဲ-မျက်နှာပါရာဒိုင်း၎င်းတို့၏အပြန်အလှန်၏ dyadic features တွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ dev ။ Psychol ။ 41, 711-722 ။
Uhlhorn, SB, Messinger, DS နှင့် Bauer က CR (2005) ။ ကိုကင်းထိတွေ့မှုများနှင့်မိခင်-ကလေးငယ်လူမှုရေးပြဇာတ်။ မွေးကင်းစကလေးပြုမူနေ။ dev ။ 28, 62-73 ။
Uvnas-Moberg, K. , ARN, ဗြဲနှင့် Magnusson, ဃ (2005) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ psychobiology: အ oxytocinergic စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍ။ int ။ ဂျေပြုမူနေ။ Med ။ 12, 59-65 ။
ဗန် Oever, MC, Spijker, အက်စ်, Smit, AB, နှင့် De Vries, တီဂျေ (2010) den ။ မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့် relapse အတွက် Prefrontal cortex plasticity ယန္တရားများ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 25, 276-284 ။
ဗန် Velzen, အေနှင့် Toth, အမ် (2010) ။ ပရိုဂရမ်းမင်းအမျိုးအနွယ်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိခင် 5-HT (1A) အဲဒီ receptor ၏အခန်းက္ပ။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 9, 877-885 ။
Venkatesan, အေ, Nath, အေ, မင်, GL နှင့်သီချင်း, အိပ်ချ် (2007) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ hippocampal neurogenesis: အလွဲသုံးစားမှု HIV နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်စည်းမျဉ်း။ cell Mol ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 64, 2120-2132 ။
Walker က, DL, Toufexis, DJ သမားနှင့် Davis က, အမ် (2003) ။ ကြောက်ရွံ့ခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကအတွက် amygdala နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၏အခန်းက္ပ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 463, 199-216 ။
Webster-Stratton, C. (1990) ။ စိတ်ဖိစီးမှု: မိဘသဘောထားအမြင်နှင့်မိသားစု interaction ကတစ်အလားအလာ disruptor ။ ဂျေ Clin ။ ကလေးသူငယ်မြီးကောင်ပေါက်။ Psychol ။ 19, 302-312 ။
Windle, RJ, Kershaw, YM, Shanks, N. , Wood က, SA, Lightman, SL နှင့် Ingram, CD ကို (2004) ။ oxytocin hypothalamo-pituitary-adrenal လှုပ်ရှားမှုမော်ဂျူနဲ့ဆက်စပ်တိကျတဲ့ forebrain ဒေသများတွင်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်က c-fos mRNA စကားရပ် attenuates ။ ဂျေ neuroscience ။ 24, 2974-2982 ။
ပညာရှိ RA နှင့် Morales, အမ် (2010) ။ စွဲလမ်းတစ် ventral tegmental CRF-အချိုမှု-dopamine အပြန်အလှန်။ ဦးနှောက် Res ။ 1314, 38-43 ။
ယန်, JY, Qi, ဂျေ, ဟန်, WY, ဝမ်, အက်ဖ်နှင့်ဝူ, CF (2010) ။ psychostimulant-သွေးဆောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုနှင့် dopaminergic နှင့် glutaminergic ဂီယာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် oxytocin ၏ Inhibitory အခန်းကဏ္ဍ။ Acta Pharmacol ။ သိန်။ 31, 1071-1074 ။
Yoshida, အမ်, Takayanagi, Y. , Inoue, K. , Kimura, တီ, လူငယ်, LJ, Onaka, တီနှင့် Nishimori, K. (2009) ။ oxytocin ကြွက်တွေမှာ serotonergic အာရုံခံအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆို oxytocin အဲဒီ receptor မှတဆင့် anxiolytic သက်ရောက်မှုပြုပြင်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထား။ ဂျေ neuroscience ။ 29, 2259-2271 ။
Zhang က, ဃ, ယန်, အက်စ်, ယန်, C တို့, Jin က, G. အများနှင့် Zhen, X တို့မှာ (2008) ။ အီစရိုဂျင်ကိုကင်းဖို့ ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံ၏တုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 199, 625-635 ။
Zhao နှင့် C. နှင့်လီ, အမ် (2010) ။ ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူ၏ haloperidol နှင့် clozapine နှောင့်အယှက်နဲ့ဆက်စပ် neuroanatomical ဆိုဒ်များက c-Fos မှတ်ပုံတင်။ neuroscience 166, 1043-1055 ။
keywords: စွဲ, ဆုလာဘ်, စိတ်ဖိစီးမှု, မိဘအုပ်ထိန်း, preclinical, လူ့
ကိုးကား: ရပ်သဖော့ဒ HJV, Williams ဟာ SK ကို, Moy S က, Mayes LC နှင့်စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်မိခင်မိဘအုပ်ထိန်း circuitry ၏ Johns JM (2011) Disruption: ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ rewiring ။ တပ်ဦး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2: 37 ။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2011.00037
Received: 22 ဖေဖော်ဝါရီလ 2011; ဆိုင်းငံ့စက္ကူထုတ်ဝေ: 06 ဧပြီလ 2011;
လက်ခံခဲ့သည်: 09 ဇွန်လ 2011; အွန်လိုင်း Published: 06 ဇူလိုင်လ 2011 ။
Rina Eidenဘတ်ဖလိုး, ယူအက်စ်အေမှာတက္ကသိုလ်
ဆူး Carter ကချီကာဂိုမှာအီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်, အမေရိကန်နိုင်ငံ
ကယ်လီလမ်းဘတ်, Randolph-မာဂွန်ကောလိပ်, အမေရိကန်နိုင်ငံ
မူပိုင်: © 2011 ရပ်သဖော့ဒ, ဝီလျံ, Moy, Mayes နှင့် Johns ။ ဒါဟာစာရေးသူနှင့်အခြားဖိုရမ်များအတွက်အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ Frontiers မီဒီယာလုပ် SA, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်မျိုးပွားအကြား non-သီးသန့်လိုင်စင်တစ်ခု Open-access ကိုဆောင်းပါးဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်, မူရင်းစာရေးဆရာများနှင့်အရင်းအမြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်နှင့်အခြား Frontiers အခြေအနေများနှင့်အတူလိုက်နာနေကြသည်။
* ပေးစာယူ: Helena ဖက်စပ်ရပ်သဖော့ဒယေးလ်ကလေးလေ့လာမှုစင်တာ, ယေးလ်တက္ကသိုလ်, 230 တောင်ပိုင်း Frontage လမ်း, New Heaven, CT 06520, USA ။ e-mail,: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]; စာရာသည် K. Williams က, စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, North Carolina မှ-Chapel Hill, 436 တေလာခန်းမ, သမဝါယမ # 7096, Chapel Hill, NC 27599, အမေရိကန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်။ e-mail,: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]